အမျိုးသမီး ၂ ဦးကို လိင်စိတ်ကြွဆေး ရောင်းချမှုဖြင့် အရေးယူမည်ဟု ရဲ ပြောဆို
ဈေးဝယ်စင်တာ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး ၂ ဦးကို လိင်စိတ်ကြွဆေး ရောင်းချမှုကြောင့် အရေးယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ဒဂုံမြို့နယ် ရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးတို့သည် ရန်ကုန် ပြည်လမ်းမပေါ်မှ တော်ဝင်စင်တာ အောက်ထပ်ရှိ Orange စူပါမားကတ်နှင့် ၎င်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိ စိန်ဂေဟာ ဈေးဝယ်စင်တာ ဆေးအရောင်း ကောင်တာတို့မှ ဖြစ်ပြီး စိတ်ကြွဆေးဝါးများကို ၎င်းတို့က တာဝန်ယူ ရောင်းချခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ ဒဂုံမြို့နယ် ရဲစခန်းက အမျိုးသား ဆေးဝါးဥပဒေပုဒ်မ ၁၈ အရ ဖမ်းဆီး အချုပ်ချထား၍ ရက်ပိုင်းအတွင်း အရေး ယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့ကို စစ်ဆေးပြီးပြီ။ ဆေးတွေကို တာဝန်ယူပြီး ရောင်းချတာပါလို့ ထွက်ဆိုထားတယ်။ အခုတော့ အရေးယူဖို့အတွက် ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို စောင့်နေတယ်” ဟု ဒဂုံမြို့နယ် ရဲစခန်း မှတာဝန်ရှိသူ က ဧရာဝတီ၏ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက်ကို ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
ဒဂုံမြို့နယ် ရဲစခန်းမှ ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး နှစ်ဦးကို စစ်ဆေးရာတွင် လိင်စိတ်ကြွ ဆေးဝါးများကို ၎င်းတို့အနေဖြင့် တာဝန်ယူ ရောင်းချခဲ့သည်ဟု ဆိုကြောင်း၊ အာမခံပေး၍ မရသည့် အမှုဖြစ်သဖြင့် လက်ရှိတွင် စခန်းတွင်း အချုပ်ချထားကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်ရှင်ကလည်း ဆေးဝါးရောင်းချသည့် အပေါ် ဖြေရှင်းခြင်း မရှိသော်လည်း တချို့ကိစ္စများကို တာဝန် ယူမှုရှိကြောင်း၊ အရေးယူရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ စာတင်ထားပြီးဖြစ်၍ ခွင့်ပြုချက် ပြန်ရသည်နှင့် အရေးယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
သို့ရာတွင် အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ် မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက ဒဂုံမြို့နယ်ရဲစခန်းသို့ လာရောက်ရန် တာဝန်ရှိသူက ချိန်းဆိုခဲ့သောကြောင့် ဧရာဝတီက သွားရောက်ခဲ့ရာ ထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီကို ချိန်းဆိုခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဖြေကြားခြင်း မပြုနိုင်ကြောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မသိရကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
ယခင်က လိင်စိတ်ကြွဆေး ရောင်းချခြင်းကို စီမံချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ရာတွင် လမ်းဘေးဆေးဆိုင်များနှင့် ဆေးဝါးများကို ဗန်း များဖြင့် ခင်းကျင်း ရောင်းချသူများကိုသာ အဓိက ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း လက်ရှိစီမံချက်တွင် ဈေးဝယ်စင်တာများရှိ ဆေးဆိုင် များတွင်ပါ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ စိန်ဂေဟာ စူပါစင်တာသို့ မေးမြန်းရာ ၎င်းတို့အနေဖြင့် စိတ်ကြွဆေး ရောင်းချမှုကြောင့် အဖမ်းခံရသည့် ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးကိစ္စကို သေချာမသိရှိကြောင်းသာ ဖြေကြားသည်။
“အဖမ်းခံရတဲ့ ဝန်ထမ်း မိန်းကလေးက သူလိုကိုယ်လို လခစား ဝန်ထမ်းပါပဲ။ ခိုင်းလို့လုပ်ရတာပဲ။ သူက ဝယ်ပြီး ရောင်းချလို့မှ မရတာ။ အခုတော့ ဘယ်လို ဖြေရှင်းမလဲ ကျနော်တို့ မသိဘူး” ဟု စိန်ဂေဟာ စင်တာမှ အရောင်း ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ဒုတိယအပတ်မှ စတင်ကာ ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် နယ်မြို့တချို့တွင်ပါ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း မရှိသည့်် လိင်စိတ်ကြွဆေးဝါးများ ရောင်းချမှုကို စီမံချက်ဖြင့် လိုက်လံ ဖမ်းဆီးလျှက်ရှိသည်ဟု အဆိုပါ ဆေးဝါး မှောင်ခိုဈေးကွက်မှ သိရသည်။
“ဆေးတွေကို ဒိုင်မှာကို သွားမယူတော့တာ အဖမ်းအဆီး အရမ်းများနေသေးလို့ အခြေအနေ စောင့်ကြည့်နေတယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာ လောလောဆယ် လုံးဝမရှိသလောက်ပဲ” ဟု ပန်းဆိုးတန်းမြို့နယ်အတွင်း စိတ်ကြွဆေး မှောင်ခိုရောင်းချသူ တဦးက ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးထားသူ အမျိုးသမီးနှစ်ဦး၏ အမည်၊ ၎င်းတို့ကို စွဲဆိုမည့် တရားရုံး၊ ရှေ့နေ ငှားထားခြင်း ရှိမရှိ စသည့် အသေး စိတ်အချက်အလက်များကို ယခုအထိ စုံစမ်း၍ မရသေးပေ။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 11:03 AM ,0comments
လျှပ်စစ်မီး ခွဲတမ်းစနစ်ကြောင့် မူဆယ် လုပ်ငန်းရှင်များ အခက်ကြုံ
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့တွင် လျှပ်စစ်မီးကို အလုပ်ချိန်တွင် ခွဲတမ်းစနစ်နှင့် ပေးနေသောကြောင့် စီးပွားရေး သမားများ အခက်ကြုံနေရသည်ဟု မူဆယ်ဒေသခံများက ဆိုသည်။
အလုပ်ချိန်အတွင်း လျှပ်စစ်မီးကို ခွဲတမ်းစနစ်ဖြင့် ဆက်ပေးသွားမည် ဆိုပါက ကုန်ဈေးနှုန်းများ တက်သွားနိုင်သည်ဟု မူဆယ်စက်မှုဇုန်တွင် လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသည့် ဦးစိုင်းထွန်း လူက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
မူဆယ်မြို့တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကို ယခင်က တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲခဲ့ကြရသည်။
“အရင် တရုတ်မီး သုံးတုန်းက မီး ပျက်တာ မရှိဘူး။ မီးအားမနိုင်လို့ ခွဲတမ်းနဲ့ ပေးတယ်ဆိုတာလည်း မရှိဘူး။ အခုဆိုရင် မီးပျက်လွန်းလို့ အလုပ်လုပ်ရတာ တော်တော် စိတ်ပျက်တယ်။ ပျက်တဲ့ အချိန်ကလည်း နေ့လယ်အလုပ်ချိန်လေ” ဟု ဦးစိုင်းထွန်းလူက ဆိုသည်။
မူဆယ်မြို့ တမြို့လုံး မကြာခဏ မီးပျက်နေမှုကြောင့် စက်မှုဇုန်တွင် လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် အလုပ်မဖြစ်ကြောင်း၊ စက်မှုလုပ်ငန်း ဆိုသည်မှာ လျှပ်စစ်မီးကို အားကိုး လုပ်ရသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ရာ မီးမရရှိသဖြင့် ဒုက္ခရောက် နေကြောင်း၊ ယခင်က တဘက်နိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ရာတွင် အဆင်မပြေမှုများ ရှိခဲ့သော်လည်း ယခု ပြည်တွင်း ကုမ္ပဏီထံမှ ၀ယ်ယူ သုံးစွဲရာတွင် ပို၍ အဆင်မပြေ ဖြစ်ရကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခွင့်ကို အစိုးရက ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Junction River ကုမ္ပဏီအား ၂၀၁၂ ခုနစ် နိုဝင်ဘာ မှစတင် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ အချိန် မူဆယ်မြို့ကို ဓာတ်အားဖြန့်ချိနေသည့် Junction River ကုမ္ပဏီသို့ ဧရာဝတီမှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ “မီးကို ခွဲတမ်းစနစ်နဲ့ ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ မီးကြိုးတွေကို စိတ်မ ချလို့ စစ်ဆေးနေတာပါ။ မကြာခင် အချိန်ပြည့် ပြန်ပေးသွားမှာပါ” ဟု ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ခွဲတမ်းစနစ်ဖြင့် ပေးမည့် အချိန်ဇယားနှင့် အတူ တရပ်ကွက်လျှင် ၃ နာရီခန့် အလုပ်ချိန်အတွင်း မီးပျက်မည်ဟု အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ထားကြောင်းနှင့် လျှပ်စစ်မီးအား မနိုင်သည့်အတွက် ခွဲတမ်းစနစ်ဖြင့် ပေးသည်ကိုလည်း အကြောင်းကြားထားကြောင်း မူဆယ်မြို့ တောင်ရပ်ကွက်နေ စိုင်းအောင်မြတ်က ဧရာ ၀တီသို့ ပြောသည်။
“ဒီလို မီးပျက်တာ နှစ်လလောက်တော့ရှိပြီ။ ခွဲတမ်းစနစ်ကလည်း ရပ်ကွက်တိုင်းလိုလို နေ့လယ်ပဲ ပျက်တယ်။ အလုပ်ချိန်မှာ မီးအားမနိုင်လို့ လျှော့တယ်တဲ့။ အရင် တရုတ်မီးသုံးတုန်းက မီးအားမနိုင်လို့ဆိုတာ မရှိဘူး။ အမြဲတမ်း လာတယ်” ဟု စိုင်းအောင်မြတ်က ဆိုသည်။
နေ့လယ်ဘက် ခွဲတမ်းစနစ်ဖြင့် မီးပေးမှုကြောင့် မူဆယ်ဈေးရုံ အတွင်း ဈေးရောင်းသူများက မီးပျက်သည့်အခါ မီးစက်မောင်းပြီး ရောင်းချနေသည့် အတွက် မီးစက်ဆူညံသံနှင့် အခိုး အငွေ့ အနံ့အသက်များ ထွက်ပေါ်နေရာ ဈေးသည် ဈေးဝယ်များ စိတ် အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရကြောင်း မူဆယ်ဒေသခံများက ပြောသည်။
တရုတ်နိုင်ငံမှ ၀ယ်ယူသုံးစွဲခဲ့သည့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၀ ပြည့်နစ်အတွင်းတွင် လျှပ်စစ်မီးကို စိတ်ချစွာ သုံးစွဲခဲ့ရကြောင်း၊ မီးပျက်ခြင်း၊ မီးအားကျခြင်း များလည်း မရှိသလောက် နည်းပါးကြောင်း၊ သုံးစွဲခ တယူနစ်လျှင် ၁. ၅ယွမ် (၂၀၀ ကျပ်) ပေးရကြောင်း၊ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နောက်ပိုင်း မြန်မာအစိုးရမှ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေသည့် အခါတွင် လုပ်ငန်းခွင်သုံး လျှပ်စစ်မီးကို တယူနစ် ၇၅ ကျပ်နှင့် သာမန်အိမ်သုံး လျှပ်စစ်မီးကို တယူနစ် ၃၅ ကျပ် နှုန်း ကောက်ခံသည့်အတွက် ဈေးလျော့ကျသွားသည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း ထိုအချိန်မှစ၍ မီးများ မကြာခဏ ပျက်လာပြီး ဗို့အား လျော့နည်း ကျဆင်းမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ် လာသည်ဟု သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသ ဖြစ်သည့် မြ၀တီမြို့သည်လည်း ယခုအချိန်အထိ ထိုင်းနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်မီး ၀ယ်ယူ သုံးစွဲကာ အဆင်ပြေ နေကြောင်း၊ လျှပ်စစ်မီး ၂၄ နာရီရရှိပြီး မီးအား ကောင်းကာ တည်ငြိမ်မှု ရှိကြောင်း မြ၀တီဒေသခံများက ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်ကဏ္ဍ တိုးတက်ရေးဆောင်ရွက်ရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းစု၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၃ ရက်ကြာ ခရီးစဉ် ရောက်ရှိချိန်အတွင်း နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ အစိုးရ၀န်ကြီးများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်း ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို တိုးမြှင့်ကူညီရန် သဘောတူညီချက်များ ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် အစီအစဉ် မရှိသေးဟုဆို
ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အနေဖြင့် အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်ထုတ်ပေးရန် ရှိ၊ မရှိ လွှတ်တော်တွင် မေးမြန်းချက်ကို သမ္မတရုံးက လတ်တလောတွင် အစီအစဉ်မရှိသေး ကြောင်း ပြန်လည် ဖြေကြားသည်ဟု အလုံမြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရည်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကာလတွင် တိုင်းပြည် ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးတို့ကို အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် ပိုမိုထိရောက်စေရန် အထက်ပါ အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ ခွင့်ကို ယမန်နေ့က ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းဝေး၌ အလုံမဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးခိုင်မောင် ရည်က တောင်းဆို ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်တွင် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲ ဖော်ဆောင်ရာ၌ ပိုမိုထိရောက်ပြီး အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အနေဖြင့် အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်တရပ် ထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ မေးမြန်းရာ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးမောင်က ပြည်ထောင်စု အစိုးရအနေဖြင့် အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်တရပ်ထုတ်ပြန်ရန် လောလောဆယ် အစီအစဉ် မရှိသေးကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
“လောလောဆယ် အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး ဆိုတဲ့စကားကို ကျနော့်အနေနဲ့ ထပ်ဖြည့်စွက်လို့ ရသေးတယ်။လောလောဆယ် ဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲ၊ အခုလား၊ ၂၀၁၃ လားပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်မှာ မေးချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး။ သူတို့မှာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ချင်စိတ် မရှိဘူး။ ကျနော်တို့က အပြုသဘောနဲ့ မေးတာ။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကျနော်ဆိုလိုတာကို သဘော ပေါက်တယ်။ သူလိုက်မှတ်နေတာ တွေ့တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်က အမေးပုံစံတင် မဟုတ်ဘဲနဲ့ Massage တခု ရသွားအောင် ဥက္ကဋ္ဌကိုရော လွှတ်တော်ကိုပါ ကျနော်ပြော ချင်တာတွေ ထည့်ပြောလိုက်တယ်” ဟု ဦးခိုင်မောင်ရည်က ဆိုသည်။
အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုသည်မှာ နက်နဲသော ကိစ္စရပ်များအပေါ်တွင် အခြေခံနေခြင်းကို သဘောပေါက်ကြောင်း၊ ယခု တင်ပြရာတွင်လည်း ဦးတည်ရာဘက် တဘက် တည်းကို သတ်မှတ်ရည်ညွှန်း ပြောဆိုခြင်းမဟုတ်ဘဲ နှစ်ဘက်စလုံးကို ရည်ညွှန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် ရှေ့ဆက်သွားမည့် နိုင်ငံရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ အတူတကွ ပါဝင် ပူးပေါင်းသူအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ခံယူထားကြောင်း ဦးခိုင်မောင်ရည်က လွှတ်တော်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ကာလတွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ရှိနေခြင်းသည် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် အနှောင့်အသွား ဖြစ်သည်ဟု ခံယူထားကြောင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့မှ ဦးထွန်းကြည်က ပြောသည်။
“တဘက်မှာ အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေး ကိစ္စပြောပေမယ့် တဘက်မှာ လွှတ်တော်အမတ် မေးတာကို အစီအစဉ် မရှိသေးဘူးလို့ ပြောတယ်။ ကျနော်တုိ့ကတော့ နားမလည်တော့ဘူး။ အခုမလွှတ်ပေးရင် ဘယ်အချိန် လွှတ်ပေးမှာလဲ” ဟု သူက မေးခွန်းထုတ်သည်။
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ ဖမ်းဆီးခံထားရ သူများအပါအ၀င် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂၀၀ ကျော် ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း၊ အစိုးရမှ ဖွဲ့စည်းထားသော နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား စိစစ်ရေး ကော်မတီ အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဟုတ်မဟုတ် စိစစ်ရမည့်သူမှ လွဲ၍ စာရင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံးကို လွှတ်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ဦးထွန်းကြည်က ပြောသည်။
“ထောင်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြောပလောက်အောင် မရှိတော့ဘူးလို့ပဲ ပြောပြော၊ တယောက် ကျန်နေရင်တောင် အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဆိုတဲ့ စကားက တော်တော် ကျယ်ပြန့် ပါတယ်။ ကျနော်ဆိုလိုတာက ပြည်တွင်းပြည်ပ မြေပေါ်မြေအောက် အကုန်လုံး ပါပါတယ်။ အခုက တချို့ကိစ္စတွေကိုတော့ သူတို့က လာခွင့်ပြုတယ်၊ နေခွင့်ပြုတယ်။ တချို့ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကိုတော့ လာခွင့်မပြုဘူး။ ကျနော်တို့က တဘက်မှာ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကို တောင်းဆိုသလို တဘက်ကလည်း ကိုယ့်ဘက်က ပြန်ပေးရမှာ ရှိတယ်။ သူတို့ဘက်က ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ် ရှိတဲ့သူတွေကိုလည်း ကျနော်တို့က ခွင့်လွှတ်ပေးရမယ်၊ ဘက်ကိုတဘက်တည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် ဆိုတဲ့စကားကို ကျနော် လွှတ်တော်ထဲမှာ ထည့်ပြောခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ဘက်ကိုလည်း ဖြေလျော့ပေးရမယ့်အပြင် သူတို့ဘက်ကို အာဃတတွေ ထားနေရင်လည်း ပွဲကပြီးမှာ မဟုတ်တော့ ဘူး” ဟု ဦးခိုင်မောင်ရည်က ရှင်းပြသည်။
ပြည်တော်ပြန်ချင်သူ အားလုံး ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အိမ်ပြန်လာနိုင်ရန် အစိုးရအနေဖြင့် အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်တရပ် တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပြည်ပသို့ ၂၃ နှစ်ကြာ သွားရောက် နေထိုင်ခဲ့သူ ဦးထူးချစ်က ပြောသည်။
“ဖြစ်သင့်တာက အစိုးရအနေနဲ့ အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်တခု ကြေညာပေးသင့်တယ်။ ဘယ်လို အမှုမျိုးကတော့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ တတိုင်းပြည် လုံး အတိုင်းအတာနဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ဖော်ဆောင်သင့်တယ်။ အခု ကျနော်တို့ ပြန်ရောက်နေတာကလည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ယုံကြည်မှုအရ ရောက်နေတာ။ တကယ်တော့ ကျနော်တို့ အတွက် မလုံခြုံသေးဘူး။ အစိုးရ အဖွဲ့ထဲက ကူညီတဲ့သူရှိလို့ ကျနော် လာလုပ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အတွက် တိကျတဲ့ ဘာမူဝါဒမှ မရှိသေးဘူး” ဟု သူက ဆိုသည်။
ငြိမ်းချမ်းစွာ ရင်ခြားစေ့နိုင်ရေးသည်သာ ဆုံးရှုံးမှု အနည်းဆုံးသော အောင်မြင်မှု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဦးခိုင်မောင်ရည်က အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်ထုတ်ပေးရန် အစိုးရ သို့တောင်းဆိုရာတွင် ထည့်သွင်းပြောဆိုသည်ဟု သိရသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသော်လည်း လွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ပေးနိုင်ရန်မှာမူ အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ၏ ထောက်ခံချက် ရရှိရန် လိုအပ်သည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 10:55 AM ,0comments
ရုရှားက မြန်မာနှင့် စစ်ရေး ပူးပေါင်းမှု ပိုမိုလုပ်ဆောင်လို
မတ်လ ၀၆ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်
ရုရှား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Sergei Shoigu က မြန်မာနှင့် စစ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးတက် လုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ၎င်း၏ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်အတွင်း အနီးကပ် ကြိုးစားနေကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံထုတ် Deccan Herald သတင်းစာက ရေးသားသည်။
“စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဖယ်ရှားမှုနှင့် ပါတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနမှာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု များအတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်” ဟု ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း
နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Sergei Shoigu ပြောဆိုသည်။
မြန်မာ အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များမှာ ဆိုဗီယက်နှင့် တရုတ်လုပ် စစ်လက်နက် ပစ္စည်းများကို တပ်ဆင် အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး အများစုမှာ ခေတ်မမီတော့ပေ။
ရုရှား အပါအဝင် ဥရောပနှင့် အမေရိကန်တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ထားမှုများကို လက်နက်တင်သွင်းမှုမှ လွဲ၍ အားလုံးကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ရှေ့လျှောက် ပညာရေးကဏ္ဍ၊ ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍ၊ ကုန်သွယ်ရေးကဏ္ဍများတွင်ပါ ဆက်လက် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဟုလည်း ရုရှား ဝန်ကြီးက ဆက်ပြောသည်။
ဇန်နဝါရီလအတွင်းက ရှရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Sergei Lavrov နေပြည်တော်သို့ လာရောက်စဉ်ကလည်း မြန်မာအပေါ်ကျန်ရှိသည့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု အားလုံး ဖယ်ရှားပေးရန် နှိုးဆော်ခဲ့သေးသည်။
မတ်လ ၄ ရက်နေ့က နေပြည်တော်၌ ရုရှား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ ရေတပ် ဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဦးဉာဏ်ထွန်းနှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သော်၊ နိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီး ဦးဇင်ယော်၊ သမ္မတရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အခြား တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြကြောင်း မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ မြန်မာကျောင်းသား များ မော်စကို တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားခွင့် ပြုမည့် အစီအစဉ်များရှိကြောင်းလည်း ဖော်ပြပါရှိသည်။
ထိုနေ့တွင်ပင် ရုရှား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် နေပြည်တော်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ တပ်မတော် ကြည်း၊ရေ၊လေ ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရသက်ဆွေ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ် ခင်အောင်မြင့် တို့နှင့်အတူ နှစ်နိုင်ငံ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ သီးခြား တွေ့ဆုံခဲ့ကြသေးသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 4:01 PM ,0comments
အောင်လံမှ ဧရာ ကျန်းမာပါစ
(ဆောင်းပါး) ၂၁ ကြာ တည်တံ့နေတဲ့ UKT အရက်ချက် စက်ရုံက မီးခိုးလုံးတွေက အောင်လံမြို့ကို ထွန်းညှိထားသည့် အလင်းရောင်ကို ဖုန်းကွယ် လုမတတ် ကောင်းကင်ပေါ်သို့ လွင့်တက်နေသည်။
အဆိုပါ စက်ရုံမှ အရက်ချော ကုန်ကြမ်း ၉၈ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်တဲ့ အရက်ပြင်းတွေကို တရက်မှာ ပေပါ ၁၂၀ ခန့် (သို့) ပုလင်းပေါင်း ၃၆,၀၀၀ ခန့် ထုတ်လုပ်ကြောင်း စက်ရုံ လုပ်သားဟောင်း တဦးက ဆိုသည်။
“ဒီစက်ရုံက ၁၁ မိနစ်နဲ့အရက်တစ်ပေပါကို ထုတ်နိုင်တဲ့ ကြီးမားတဲ့စက်ရုံကြီးဖြစ်တယ်”
မြို့လည်ခေါင်ရှိ စက်ရုံရပ်ကွက်တွင်းမှ UKT အရက်ချက်စက်ရုံဝန်းကျင်တွင်မူ ချဉ်ပတ်နံ့က စူးစူးရှရှ ရှိလှသည်။
“အနံ့က တော်တော်ခံရခက်တာပါ။ ဝန်ကြီးလမ်းကြောင်းရှိလို့ စက်ရုံ မလည်ပတ်တဲ့ နေ့တွေဆို ကျနော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်က တော်တော် နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းပါတယ်” ဟု ရပ်ကွက်ထဲနေ ကိုယဲယဲ က ပြောသည်။
အောင်လံမှ လူငယ်များ စည်းရုံး၍ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့က သရက် အောင်လံသို့ သွားသော မော်တော်ဆိပ်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဧရာဝတီမြစ်တွင်း ရေထုညစ်ညမ်းမှုကို မီးမောင်းထိုးပြသည့် ပြရုပ် ပါဖောင့်
မန့် တခု ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဧရာဝတီမြေပုံ ဆွဲထားသော အင်္ကျီအဖြူ ဝတ်ဆင်ကာ၊ ရေထည့် ထားသော ရေအိုးကို ခွဲပြမှု ပါဝင်သည်။
စက်ရုံမှ စွန့်ပစ်ရေများကို စက်ရုံနောက်ဘက်ရှိ ဧရာဝတီ မြစ်အတွင်းသို့စီးဝင်နေသည့် အုန်းတောချောင်းသို့စွန့်ပစ် မှုများ ရှိကြောင်း UKTစက်ရုံမှ မန်နေဂျာ ဦးခင်မောင်ဆွေ က သတင်းထောက်များနှင့် ဖေဖော်ဝါရီ ဒုတိယပတ် အတွင်း တွေဆုံစဉ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
သို့သော် သူက “ကျနော်တို့ ရေစွန့်ပစ် သန့်စင်ပြီးမှ ပစ်တာပါ။ တင်လဲရေက ထွက်တဲ့ အဝါရောင်သန်းတဲ့ ရေကတော့ အနည်းငယ် ပါတာပေါ့” ဟု ဖြည့်စွက် ပြောသည်။
စက်ရုံမှ နောက်တနည်းဖြင့် ဧရာဝတီရေပိုင်နက် အောက်မှနေ၍ မြစ်အလယ်သို့ ပိုက်သွယ်တန်း၍လည်း စွန့်ပစ် ကြောင်းအသက် ၄၀ အရွယ်ရှိ စက်ရုံလုပ်သားဟောင်း တဦးက ပြောသည်။
သတင်းထောက်က သွားရောက်ကြည့်ရှု့ရာ ဧရာဝတီ မြစ်အတွင်းသောင်များဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေကာ ရေထုပမာဏ အဆမတန် လျော့နည်းနေသည့်အချိန် ဖြစ်၍ ရေအရောင်မှာ အဝါ သမ်းနေပြီး ချဉ်နံ့ ထွက်နေသည်။
သောင်ကုန်းများ ဖြစ်ထွန်းမှုသည် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ခန့်က စတင် ဖြစ်ပေါ်လာကာ သဲကျောက် ထုတ်လုပ်မှုများနှင့် လည်း ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်း ဒေသခံများက ထင်ကြေးပေးကြသည်။
သဲသောင်များ၏ ကြား၌ စီးဆင်းနေသော ရေများကို သောက်သုံးမိ၍ ဒေသခံ ကလေးသူငယ်နှင့် လူကြီးများမှာ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော ရောဂါများ ခံစားခဲ့ရဖူးကြောင်း ရွာထောင် ရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သူတဦးက ဆိုသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလလောက်က ရေက တော်တော်ကြီး နည်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ငါးတွေလည်း သေတယ်။ အဲဒီငါးတွေ ကောက်ပြီးစားတဲ့ အိမ်တွေမှာ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောတွေ တော်တော် ဖြစ်ကြတယ်”
မြို့ရှိ အထွေထွေရောဂါကု ဆရာဝန် ဒေါက်တာကြည်ဝင်း က “မြစ်ထဲကို စွန့်ပစ်ရေ ပစ်တာတော့ ဦးကန်ထွန်း (UKT စက်ရုံပိုင်ရှင်) စက်ရုံက အများဆုံးလို့ မြင်တယ်။ ကြည့်ရတာတော့ အဲဒီရေတွေ ဒေသခံတွေက မသုံးစွဲကြလောက်
ဘူး။ အဲဒီရေတွေက ညစ်ညမ်းတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှ ကျန်းမာရေးနဲ့ မအပ်စပ်ဘူး။ ကိုင်တွယ်လို့ကို အဆင်မပြေဘူး” ဟု ပြောသည်။
ထိုရေများ သုံးစွဲမိပါက အသည်းရောဂါ၊ အရေပြား ရောဂါနှင့် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ရောဂါများ ဖြစ်ပွားတတ်သည်ဟုလည်း ဒေါက်တာက သတိပေးသည်။
ယခုအခါ စက်ရုံရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းရပ်ကွက်နှင့် ရွာထောင်ရပ်ကွက် စသည့် ရပ်ကွက်ကြီး လေးခုတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှု ပြဿနာနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ငွေကြေး တတ်နိုင်သူများအနေဖြင့် အဝီစိတွင်း တူးခြင်း၊ မီးသတ်ကား စီးလုံးအလိုက် မြစ်၏ သန့်ရှင်းသောနေရာမှ ရေအား ဝယ်ယူ သုံးခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။
“မီးသတ်ကား တစီးကို ရေ ၁၂ ဂါလံ ပါတယ်။ တသောင်းခွဲ ပေးရတယ်။ တက်နိုင်တဲ့ သူတွေကတော့ စီးလုံးဝယ်သုံး တယ်။ မတက်နိုင်တဲ့ သူတွေကတော့ စုဝယ်ပြီး သုံးကြတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေအတွက် အရင်းအနှီး စိုက်ထုတ်လာရ တာပေါ့” ဟု ရပ်ကွက်နေ ကိုသက်မောင်ဝင်း က ပြောသည်။
ရေတွင်း တူးခမှာ လက်ယက်တွင်းကို ငွေကျပ် နှစ်သောင်းခွဲနှင့် စက်ဖြင့် တူးသည့် တွင်းအား ၁ ပေလျှင် ၂ ထောင် ကျပ်ခန့် ကုန်ကျကြောင်း ဒေသခံများက ဆိုသည်။ ငွေကြေး အလွန်ချို့  တဲ့သူများမှာမူ ထိုမြစ်ရေကိုပင် သုံးစွဲနေရ ကြောင်းလည်း တွေ့ရသည်။
အရက်ချက် စက်ရုံများသည် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် မြို့ ထဲများတွင် မရှိသင့်ကြောင်း စက်မှုဇုန်များ အတွင်း၌သာ ရှိသင့်ကြောင်း ရန်ကုန်ရှိ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင် ဒေါ်ဒေဝီသန့်ဇင် က ဆိုသည်။
“ကမ္ဘာ အသိအမှတ်ပြု ISO14001 ရဲ့  သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ မီးခိုးခေါင်းတိုင်က ဘယ်လောက် မြင့်ရမယ်၊ စွန့်ပစ်ရေတွေကို ဘယ်လို ပြန်သန့်စင်ပြီး စမ်းသပ်မှုတွေ ပြုပြီး တော့မှ ပစ်ရမယ်၊ စိတ်ချရပြီဆိုမှ မြစ်ထဲ ပစ်ရမယ်”
အောင်လံမြို့မှာပင် ဧရာဝတီမြစ် အတွင်းသို့ပင် စီးဝင်နေသော အခြားသော ချောင်းတခု ဖြစ်သော ပိတောက် ကုန်းချောင်း အနားရှိ ဆီးခွဲစက်အချို့မှ စွန့်ပစ်အညစ်အကြေးကြောင့် ရေထု ညစ်ညမ်းခဲ့ဖူးသည်။ စည်ပင်၊ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ရဲတပ်ဖွဲတို့က ဆီးခွဲစက်အချို့ ကို ပိတ်သိမ်းရန် ဖိအားပေးခဲ့ပြီး အခြားစက်များအား မြို့ အပြင်၌သာ ပြုလုပ်စေခဲ့ကာ ဆီးအခွံခွာသည့် စနစ်ကိုလည်း အစိုစနစ်မှ အခြောက် စနစ်သို့ ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင် စေခဲ့သည်။
ထိုသို့ ပိတ်သိမ်းခံရသည့် ဆီးခွဲစက်ပိုင်ရှင် ကိုနိုင်လင်းအောင် က “မြစ်ထဲကို ဆီးဖက် ပါလို့ လူတွေအတွက် အန္တရာယ် သိပ်မရှိနိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆီးသီးက အော်ဂန်းနစ် ဖြစ်လို့ပါ” ဟု ဆိုသည်။
အာဏာပိုင်များက ဆီးခွဲစက်များကိုသာ မြို့ ပြင် လုပ်ကိုင်ရန် ဖိအားပေးခဲ့ပြီး အရက်ချက် စက်ရုံကိုမူ မြို့ တွင်းထဲ၌ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်စေခြင်းအပေါ် ဒေသခံများနှင့် ဆီးခွဲစက် လုပ်ငန်ရှင်များက မေးခွန်ထုတ်နေကြသည်။
UKT အရက်ချက် စက်ရုံသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ကာ ထိုအချိန်မှစ၍ ဧရာဝတီမြစ်အတွင်းသို့ စွန့်ပစ်ရေများ စွန်ထုတ်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
သို့သော် အမည်မဖော်လိုသူ မြို့နယ် အဆင့်မြင့် အရာထမ်းတဦးကမူ “ဒီစက်ရုံဟာ စည်းကမ်းချက်နဲ့အညီ ရှိတယ်လို့ပဲ သိထားတယ်။ ယခင် နှစ်အဆက်ဆက်က တည်ထောင်လာတဲ့ စက်ရုံလည်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
အပူပိုင်းဒေသဖြစ်သော အောင်လံတွင် သောင်ထွန်းမှုကလည်း ဒေသခံများအတွက် တနေ့ထက်တနေ့ ရေရှားပါမှုမှာ ပိုမိုခက်ခဲလာတော့သည်။
“ကျနော်တို့ မြို့ နဲ့ နီးစပ်တဲ့ ရွာတွေမှာ ရေတွင်းတူးလို့ မရဘူး။ မြစ်ရေကလည်း သောက်သုံးလို့ မရတော့ ရေခက်ခဲတဲ့ ပြဿနာက ပိုဆိုးတာပေါ့။ နောက်လဆို ဆင်ပေါင်ဝဲက သရက်အုပ်နဲ့ သာယာကုန်းရွာတွေ ရေရှားတော့မယ်” ဟု ဒေသခံ ကိုသက်မောင်ဝင်း က ပြောသည်။
ဧရာဝတီ မြစ်အောက်ပိုင်းတွင် သဲသောင်များ ဖြစ်ထွန်းမှုသည် အောင်လံမြို့ ၏ တဖက်ကမ်း ဖြစ်သော သရက်မြို့ နှင့်ပင် ထိစပ်တောပမည်ဖြစ်၍ ဒေသခံများက အောင်လံနှင့် သရက်ကို ဆိုင်ကယ်နှင့် သွားလို့ ရတော့မည် ဟုပင် သရော်နေကြသည်။
“အရင်က ဧရာဝတီ မြစ်အောက်ပိုင်း သောင်ဖုံးမှုက အရင်က ရေထု တမိုင်လောက် ကျန်တယ်။ အခု တဖာလုံလောက်ပဲ ကျန်တော့တယ်” ဟု ဒေသခံ ကျောင်းဆရာဟောာင်း တဦးက ပြောသည်။
သောင်ထွန်းမှု အဆမတန် ကျယ်ဝန်းသည့်အတွက် အင်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း အောင်လံဒေသရှိ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
“အင်းအနေနဲ့ မြစ်က ရောက်ရှိသွားတယ် ဆိုတော့ ရေ ညစ်ညမ်းတက်ပါတယ်။ ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသတ်မှုကတော့ ရုံးချုပ်ကပဲ တင်ပြမှ လုပ်တာ။ ဒါက အင်းရေ ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ မတင်ပြတဲ့အတွက် သူတို့ကလည်း မစမ်းသပ်ဖြစ်ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က သွားစစ်တော့ လက်နဲ့ ယူပြီး နမ်းကြည့်တာတော့ နံတယ်” ဟု ၎င်းဝန်ထမ်းက ပြောပြသည်။
ထိုရေအား ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု မပြုရသေးဘဲ စက်ပစ္စည်း စုံစုံလင်လင် မရှိ၍ ဖြစ်ကြောင်း မြစ်ချောင်းဖြိုး၏ တာဝန်ရှိသူ
ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှု သတင်းများ ထွက်ပေါ်ပြီး အငြင်းပွားဖွယ်ရာ အညစ်အကြေး စွန့်ထုတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မကွေးတိုင်း အစိုးရ ဝန်ကြီးများ၊ အရပ်ဖက်ဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများ လွန်ခဲ့သောနှစ်က လာရောက် စစ်ဆေးခဲ့ကြ သော်လည်း သိသိသာသာ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာမှု မရှိသေးကြောင်း ဒေသခံများက ပြောနေကြသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 3:56 PM ,0comments
ဦးဘရန်ရှောင်၏ ဖြောင့်ချက်ယူခဲ့သူ ဒုတရားသူကြီးအား စစ်ဆေးရန် တင်ပြချက် ပယ်ချခံရ
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဟု စွတ်စွဲ၍ မြစ်ကြီးနားထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံနေရသူ ဦးလထော် ဘရန်ရှောင်ထံမှ ဖြောင့်ချက် ရယူခဲ့သူ မြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးဇော်မင်း အား စစ်မေးခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားချက်ကို ပယ်ချလိုက်သည်ဟု ရှေ့နေ ဦးဂျီမာခါး က ပြောသည်။
ဦးဇော်မင်းအား စစ်ဆေးခွင့်ပြုရန် တရားခံ ရှေ့နေ ဦးမာခါးက ယခင်ရက်သတ္တပတ်က တင်ပြခဲ့သည်ကို အင်္ဂါနေ့ မြို့နယ်တရားရုံးတွင် မြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးမြင့်ထူး က ပယ်ချ လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဦးဇော်မင်းကို စစ်ဆေးဖို့ ခေါ်ထားတာ။ မြို့နယ်တရားသူကြီးက မလိုအပ်ဘူးဆိုပြီး ပယ်လိုက်တယ်။ မစစ်ဆေးခိုင်း စေချင်လို့ နေမှာ ကျနော်တို့က အဲဒါကို ပြန်စစ်ချင်တယ်။
အမှန်တရား ပေါ်လာမှာ ကြောင့်လို့ပဲ။ တရားခံတွေဘက်က အရမ်းနစ်နာတယ်။ ကျနော်တို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ သက်သေပဲ” ဟု ဦးဂျီမာခါး က မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်နေ့က ဒု မြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးဇော်မင်းက ဖြောင့်ချက်ယူနေစဉ် ဦးဘရန်ရှောင်၏ မျက်နှာတွင် ဒဏ်ရာများ ရနေခြင်းနှင့် ဗိုက်တွင် အသံဖမ်းစက် ကပ်ပေးထားမှုကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိသဖြင့် တရားသူကြီး ဦးမြင့်ထူးက ထိုနေ့မှာပင် ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
လာမည့် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် လျှောက်လဲချက်ပေးရန် တရားသူကြီး ဦးမြင့်ထူးက ပြောဆိုလာသော်လည်း လျှောက်လဲချက် မပေးဘဲ တရားသူကြီး ဦးဇော်မင်းအား စစ်ဆေး ခွင့်ပြုရန်သာ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်သို့ ထပ်မံ တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးဂျီမာခါး က ဆိုသည်။ ဦးဘရန်ရှောင်မှာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်နေသည်ဟုလည်းပြောသည်။
ဦးဘရန်ရှောင်အား ယမန်နှစ် ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့က ဖောက်ခွဲရေးဆိုင်ရာ ပုဒ်မ ၃ ဖြင့် အမှတ်(၁) ရဲစခန်းမှ ဒုစရိုက်နှိမ်နှင်းရေးအဖွဲ့ ဒု-ရဲအုပ် ကျော်မျိုးနိုင်နှင့်အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မြစ်ကြီးနား စရဖ ထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် မတရားအသင်း ပုဒ်မ ၁၇(၁) ဖြင့် ပြန်လည် တရားစွဲဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဦးဘရန်ရှောင်သည် KIO ဝန်ထမ်းဖြစ်သည်ဟု တရားခံဘက်မှ ထွက်ဆိုချက်များမှာ စစ်ကြောရေးအတွင်း ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုဖြင့်သာ ရရှိလာသည့် ထွက်ဆိုချက်များ ဖြစ်၍ ခိုင်လုံသည့် အခြားအထောက်အထား မရှိကြောင်း ရှေ့နေ ဦးဂျီမာခါးက ပြောဆိုထားသည်။
အစိုးရတပ်နှင့် KIO တပ်များအကြား တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်မှစ၍ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်းရှိ ဒေသခံများ အနည်းဆုံး လူ ၇၀ ကျော်မှာ မတရားသင်း ဥပဒေဖြင့် ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံထားရကြောင်း သိရသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 3:50 PM ,0comments
နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ယုံကြည်စိတ်ချမှုပိုမိုရရှိရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာအကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခများ ဖြေ ရှင်းရေး နယူးယောက် သဘောတူညီချက်(New York Convention) အဖွဲ့ ၀င်ရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ယမန်နေ့ က သဘောတူညီ လိုက်သည်။
New York Convention အဖွဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ ၀င်ရောက်ရေးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၆ ဦး က ဆွေးနွေး ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် New York Convention အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့လျှင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချမှု ပိုမိုရရှိလာ မည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အကျိုးစီးပွား ပဋိပက္ခ တစုံတရာဖြစ်ပွားခဲ့ပါက နိုင်ငံတကာ ခုံသမာဓိရုံးတွင် ဖြေရှင်းနိုင်ပြီး မိမိနိုင်ငံ၏ တရား ဥပဒေများနှင့်လည်း တရားဝင် ဖြေရှင်းနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးကို ခံစားရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထိုသို့ဝင်ရောက်ပါက အပြည်အ၀ အကျိုးရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်ပါက ဖြေရှင်း ရန် မိမိနိုင်ငံ၏ တရားစီရင်ရေး ယန္တရားကို အဆင့်အတန်းမီမီ ပြုပြင်ထားရန်၊ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းရမည်ဆို သည်ကို လည်း ကျေညက်စွာ နားလည်ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံ၏ အရည်အသွေးကို ယုံကြည်မှသာ လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။
New York Convention အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံဖြစ်ရေးအတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ အဆိုတင်သွင်းခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လသာမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကြည်မြင့်က“စစ်အစိုးရ လက်ထက်က နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးမျက်နှာစာမှာ စင်ကာပူ၊ ရုရှား၊ တရုတ်တို့လို ပွဲစားနိုင်ငံတွေနဲ့ပဲ ဆက်ဆံရတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တွေ အလိမ်ခံရရင် သူတို့တရားရုံးတွေက အနိုင်ပေးတာတောင် ကာယကံရှင်က မပေးဘဲနေတာ ကြုံဖူး တယ်၊ အခုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ် ရင် ဒီလိုလုပ်လို့ မရတော့ဘူး”ဟု ပြောဆိုသည်။
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်လာသည့်အတွက် အမေရိကန်အပါအ၀င် အနောက်နိုင်ငံများက စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ မှုများ ဖြေလျှော့လာပြီ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် စီးပွားရေးဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်လာကြပြီဖြစ်ရာ မတော်တဆ လိမ်လည်ခံရမှု၊ ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ် ပေါ်လာပါက နစ်နာမှုမရှိစေရန် New York Conventionသို့ ၀င်ထားရမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဦးကြည်မြင့်က ဆက်ပြောသည်။
အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု ၀န်ကြီးဌာန ဒု ၀န်ကြီး ဦးဆက်အောင်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးတက်လာရန် အခြေခံ အဆောက်အအုံ ကောင်းများ လိုအပ်ကြောင်း၊ ပြင်ဆင်ထားရန်လည်း လိုအပ်ကြောင်း လွှတ်တော် ၌ ပြောကြား သွားသည်။
New York Convention အဖွဲ့ကို ၁၉၅၈ ခုနှစ်က ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ၁၉၃ နိုင်ငံထဲမှ အဖွဲ့ဝင် ၁၄၆ နိုင်ငံ ရှိကြောင်း၊ မြန်မာ့ အိမ်နီးချင်း ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ် စသည့်နိုင်ငံများမှာ အဖွဲ့ဝင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ New York Convention အဖွဲ့သည် ကုလသမဂ္ဂ လူမှုရေးနှင့် စီးပွားရေးကောင်စီနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အဖွဲ့ လည်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 1:01 PM ,0comments
လက်ပန်းတောင်း အရေး တအုံနွေးနွေး
မုံရွာမြို့ တဘက်ကမ်းကို စက်လှေနဲ့ ဖြတ်ပြီး တမာပင်နဲ့ ထနောင်းပင်တန်းတွေ ရှိတဲ့ ဆားလင်းကြီးလမ်းကို ဆက်သွားတဲ့အခါ လက်ပန်းတောင်းတောင် အနီးက တုံရွာသပိတ် စခန်းကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ လမ်းမတခုလုံးက တမာရွက်ဝါကြွေတွေနဲ့ ၀ါထိန်လို့ နေပါတယ်။
အဲဒီ သပိတ်စခန်းကို ရောက်တော့ ဆန္ဒပြနေတဲ့ ရွာသူ ၂၀ လောက်နဲ့ ရန်ကုန်ကနေ လာကူညီနေတဲ့ ဒေါ်နော်အုန်းလှတို့ စကား ပြောနေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူ့ဘေးနား မှာ ဒေသခံတွေက နားထောင်နေပြီး သူကသာ ဥပဒေ အကြောင်း အရာတွေကို ဒိုင်ခံရှင်းပြနေတယ်။
“ညတုန်းက ဒီသပိတ်စခန်းကိုပဲ ၀င်စီးတော့မလိုလိုနဲ့ ကင်းတွေ ချထားရတယ်။ လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းတွေ ဖြိုခွင်းခံရတဲ့ ၃ လပြည့်နေ့ကလည်း ဒီက ဒေသခံတွေရဲ့ ဆန္ဒအတိုင်း တရက် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသေးတယ်။ ကျမတို့က ပံ့ပိုးပေးတာပဲရှိတာ၊ သူတို့ကတော့ တောင်ကြီး မပျက်စီးရေးနဲ့ လယ်ယာမြေတွေ ပျက်စီးမှာ မလိုချင်ကြဘူး” လို့ ဒေါ်နော်အုန်းလှက ပြောပြတယ်။
သပိတ်စခန်းမှာရှိနေတဲ့ သူတွေကတော့ လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းတွေ ဖြိုခွင်းခံလိုက်ရပြီး ၁၇ ရက်အကြာ ပြန်စဖွင့် ကတည်းက လာရောက်နေကြတဲ့ သူတချို့ရှိသလို အ၀င်အထွက်၊ အသွားအပြန် လုပ်နေတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ အများအားဖြင့် ညနေဘက် ရောက်မှ လူများလာတတ် ကြတယ်လို့ သိရတယ်။
လက်ပန်းတောင်းတောင် အရေးအတွက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်အပေါ် အယုံကြည် မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် ဒီလို သပိတ်စခန်း ပြန်ဖွင့်ရတာလို့ ဒေသခံတွေက ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း ဒေါ်နော်အုန်းလှက ရှင်းပြပါတယ်။
ဒေသခံတယောက်က “ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အားကိုးစရာမရှိဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အားကိုးရမှန်းမသိဘူး။ ထွက် ဆိုတော့လည်း ရေဘူးလေးဆွဲ၊ ဖိနပ်လေးဆွဲပြီး ထွက်လာတာပဲ” လို့ ကြားဖြတ်ပြောတယ်။
လက်ပန်းတောင်းတောင် အရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး နိုင်ငံတော်ကနေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်ပြီး ဒေသခံ တချို့ ပါဝင်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မတီတရပ်ကို ဖွဲ့စည်းကာ ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလကုန်မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တင်သွင်းဖို့ သတ်မှတ် ထားပေမယ့်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဒီနေ့အချိန်ထိ တင်သွင်း ထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
ဒါကြောင့်လည်း ဒေသခံများအကြား လက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင်မှုကို လုံးဝမလိုလားဘဲ အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းရေးကိုသာ ဦးတည်နေကြပေမယ့် စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ရဲ့ အဖြေကို စောင့်နေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိနေသလို အဲဒီကော်မရှင်ကို ယုံကြည်မှုမရှိဘဲ ဆန္ဒဆက်ပြနေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒေသခံတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ ဒီလက်ပန်းတောင်းတောင်က ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝ ဖျက်သိမ်းရေးကိုတော့ ဘုံသဘောတူညီမှု ရှိကြတယ်။ လက်ရှိကာလမှာ ဒီစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေးအပေါ် ဖော်ဆောင်နေတဲ့ ပုံစံတွေကတော့ မတူညီကြပါဘူး။
“ရည်မှန်းချက်တွေတော့ အားလုံးက သဘောထား တူညီကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က သပိတ်စခန်းကို ပြန်ဖွင့် ခဲ့ရတာ ဒေသခံပြည်သူတွေ နိုးကြားနေဖို့နဲ့ မြန်မာ တနိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေရဲ့ စိတ်ပါလက်ပါ အားပေးထောက်ခံမှုတွေ အရှိန် မကျစေဖို့ပါ။ ဒေသခံတွေအပေါ် စာနာထောက်ထားမှုတွေ ဆက်ရှိနေစေချင်တယ်။ ဒီလို လုပ်တဲ့အထဲမှာ တဦးနဲ့တဦး အကောင်အထည် ဖော်တဲ့အပိုင်းတော့ ကွဲပြားနေတာပေါ့” လို့ လက်ပန်းတောင်းအရေးကို ကူညီနေတဲ့ ကိုဟန်ဝင်းအောင်က ပြောတယ်။
လက်ပန်းတောင်းတောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဆိုတာက အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့ လွှတ်တော်ထံသာ တင်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီး သူတို့ကော်မရှင်မှာ ဆုံးဖြတ် ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် အခုလို သပိတ်စခန်းဖွင့်ပြီး အခြေအနေကို စောင့်ကြည့် နေရတဲ့အကြောင်း ရှင်းပြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ သပိတ်စခန်းမှာရှိနေတဲ့ ဒေသခံတွေကို မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ တကယ်လို့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ကနေ အဖြေ ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဒီလက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်းကို ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆန္ဒပြကြမယ့် အရှိန်ကို တိုးမြှင့်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
တကယ်လို့များ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ကလို ဆန္ဒပြကြတဲ့သူတွေကို အကြမ်းဖက်မယ် ဆိုရင်တော့ တနည်းနည်းနဲ့ လက်တုံ့ ပြန်သွားမယ့်အကြောင်း မိုးကြိုးပြင်အလယ်ရွာက မခင်မာရွှေက ဆိုပါတယ်။
“ပထမ တကြိမ်တုန်းကတော့ ဒေသခံတွေက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းတာကို လက်တုံ့မပြန်ခဲ့ဘူး။ ဒီတကြိမ်မှာ ဒီလို ပြန် အကြမ်းဖက်မယ် ဆိုရင်တော့ ဒေသခံတွေက ရရာအနေ အထားကနေ ပြန်လက်တုံ့ပြန်တော့မယ်။ သူတို့က ဆက်ကြမ်းမယ်ဆိုရင် ဒီဘက်ကလည်း ပြန်ကြမ်းမယ်” လို့ သူက ဆက်ပြောတယ်။
ဆည်တဲရွာရဲ့ အ၀င်ဝအရောက်မှာတော့ “သတိ စစ်ဆေးမှု ခံယူပါ အန္တရယ်ဇုန်” ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ရွာကို ကာရံထားတဲ့ တံခါးက ဆီးကြိုနေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ညတိုင်း ရွာသားတွေက ကင်းစောင့်ကြတဲ့အကြောင်း ဒေသခံတချို့က ပြောပြတယ်။
ဒီရွာအ၀င်တင်မကပါဘူး၊ ရွာထဲက ထွက်ပေါက်မှန်သမျှ ဒီလို တံခါးနဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ ကင်းတဲလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ ရွာရဲ့တဘက်မှာတော့ လယ်ကွက်တွေနဲ့ လက်ပန်းတောင်း တောင်ကြီးကို မြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။
လက်ပန်းတောင်း တောင်ရဲ့ဘေး လယ်ကွက်လက်တွေ ထဲမှာတော့ မြေစာပုံတွေက မူလတောင် တ၀က်လောက်အထိ မြင့်မားစွာ ရပ်တည်နေပါပြီ။ ဆည်တဲရွာရဲ့ အပြင်ဘက် လယ်ကွက်တွေကစပြီး ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားတဲ့ နေရာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်း သိရတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်ပံတောင်း တောင်ခြေတွေမှာ လုံခြုံရေးရဲတွေ စောင့်ကြပ်နေတာကို မတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။
မြေစာပုံတွေကို ပတ်ပြီး လယ်ကွင်းတွေကို ဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါမှာ မုံရွာကနေ ဖိုဝင်တောင်၊ အလောင်းတော် ကဿပကို သွားတဲ့လမ်းကို ပြန်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ဖြတ်သန်းသွားချိန် တိုးဝင်လာတဲ့လေတွေက လေပူတွေပဲ ဖြစ်နေတာကို သတိထားမိတယ်။ ဒီနေရာက အရင်နှစ်တွေထက် ပိုပူလာ တဲ့အကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပြတယ်။
မုံရွာကိုပြန်ဖို့ အဲဒီကားလမ်းအတိုင်း ဆက်လာတဲ့အခါမှာတော့ လက်ပန်းတောင်းတောင် စီမံကိန်းကို လုပ်ကိုင်နေတဲ့ တရုတ် ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီကို ဖြတ်လာခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအရှေ့မှာတော့ ရဲလုံခြုံရေးတချို့ရှိနေပြီး ကုမ္ပဏီဝင်းထဲမှာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့ တချို့ စခန်းချနေတာကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။
ကုမ္ပဏီက ကားလမ်းရဲ့ နှစ်ဘက်စလုံးမှာ အဆောက်အဦး အများအပြားနဲ့ ရှိနေတဲ့အပြင် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျူးကျော်ဝင်လာရင် ဥပဒေအရ အပြစ်ပေးခံရမယ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကိုလည်း ချိတ်ဆွဲထားတယ်။ ကုမ္ပဏီ အဆောက်အဦးတွေရဲ့ အကျော်မှာလည်း ကားလမ်းဘေးတွေက သံဆူးကြိုးတွေနဲ့ အသင့်ချထားတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
၀က်မှေးရွာထဲမှာတော့ ဒေသခံ တော်တော်များများ ရွာထဲမှာ မရှိကြပါဘူး။ လယ်ကွင်း၊ ယာကွင်းထဲမှာကလည်း ဒီရာသီက စိုက်ပျိုးမှု ရပ်နားနေချိန်ဖြစ်တဲ့ အတွက် မုံရွာမြို့ပေါ်မှာ ဈေးရောင်း ချနေတဲ့သူတွေက ရောင်းချနေသလို၊ တချို့ကလည်း ပုံမှန် င်ငွေရမယ့် အလုပ်တခုခု လုပ်နေကြတဲ့အကြောင်း သိခဲ့ရတယ်။
ဒီရွာခံတွေက လက်ပန်းတောင်းအရေးမှာ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာကပါ သိခဲ့ရတဲ့ နေရာ၊ တခြား ရွာတွေကလည်း ပါပေမယ့် လက်ပန်းတောင်းအရေးမှာ အမာခံရွာလို့တောင် ခေါ်ရတဲ့ရွာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်း ဆက်လုပ်ဖို့အတွက် အလျော်အစားတွေ မလိုချင်တဲ့အကြောင်း၊ ဒီတောင်ကြီးမှာ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီ ယာတွေကနေ သေချာပေါက် ဖယ်ပေး ရမှာဖြစ်တဲ့ အကြောင်း၊ အဖယ် မခံနိုင်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဒီရွာသူရွာသားတွေက စာမတတ်၊ ပေမတတ် ဖြစ်တာမို့ တရုတ်ကျွန် ခံရမှာ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ၀က်မှေးရွာသူ မဖြူဖြူဝင်းက ပြောပြတယ်။
“အခုတောင် စကာစရှိသေးတယ်၊ နှစ်ပိုင်းလေးပဲ ရှိသေးတယ်။ သူတို့ မြေကွက် သိမ်းထားတဲ့အထဲကို သီးနှံတွေစိုက်တယ်။ အဲဒီစိုက်တာမှာ ရွှေ့ပြောင်းပေး လိုက်ရတဲ့ ရွာထဲ ကလူတွေက အဲဒီမှာ ပေါင်းနှုတ်နေရတယ်။ အရင် ယာပိုင်ရှင်၊ မြေပိုင်ရှင်တွေက သူများကျွန် ဖြစ်နေတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း သန့်ရှင်းရေး အလုပ်လောက်ပဲရမယ်။ ဒီစီမံကိန်း အောင်မြင်လို့ ကတော့ မဖြစ်ဘူး” လို့ သူက ဆက်ပြောတယ်။
နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းဆိုတာ အများ ပြည်သူ အတွက်လို့ ပြောကြပေမယ့် ဒေသခံ ပြည်သူပြည်သားတွေ ၀မ်းနည်း ပက်လက် ဖြစ်နေတော့ နိုင်ငံတော် ကောင်းစားမယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားလို့ သူက မေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။
အခု သပိတ်စခန်းဖွင့်တဲ့ကိစ္စမှာ သူတို့အနေနဲ့ မပါဝင်ရတဲ့အကြောင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယုံကြည်သလို၊ သူဦးဆောင်တဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ အဖြေကို စောင့်ချင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ကြောင်းလည်း မဖြူဖြူဝင်းက ပြောပြတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုလို ဆက်လက် ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေကိုလည်း အမြဲ အားပေးနေတဲ့အကြောင်း၊ သူတို့နဲ့ တစိတ်တ၀မ်းတည်း ရှိနေတဲ့အကြောင်း သူက ဆက်ပြောတယ်။ သူတို့အ နေနဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေရင်း အိမ်ရဲ့ စီးပွားရေး အတွက်လည်း လုံးပန်းနေတဲ့အကြောင်း၊ နောင်တချိန် သူတို့ လိုချင်တာ မရတဲ့အခါ အတွက် အားပြန် မွေးရမှာ ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းတွေကို ပြောဆိုတယ်။
တကယ်လို့များ ဒီစီမံကိန်းကြီးကို ဆက်လုပ်မယ် ဆိုရင်တော့ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေ၊ လက်ပန်းတောင်းတောင် ကယ်တင်ရေး အဖွဲ့အသီးသီး၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ စတဲ့ အဖွဲ့အသီးသီးနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အကောင်းဆုံး အခြေအနေနဲ့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမယ့်အကြောင်း မဖြူဖြူဝင်းက သူ့ရဲ့သဘောထားကို ပြောပြတယ်။
ဒါပေမယ့် ၀က်မှေးရွာ ဒေသခံတွေနဲ့ တခြား ဒေသခံတချို့ကတော့ အရင် တကြိမ်ကလို အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်း လာမယ်ဆိုရင်တောင် ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲ သဘောထားကို ထုတ်ဖော်သွားမယ့်အကြောင်း၊ ထိပ်တိုင်ရင်ဆိုင်မှုတွေကို ရှောင်ရှားမယ့်အကြောင်း သိရပါတယ်။
၀က်မှေးရွာထဲကနေ ဖြတ်ပြီး တနာရီနီးပါးလောက် မြေနီ၊ မြေဆီတွေ ကောင်းလှတဲ့ လယ်ကွင်းတွေကိုဖြတ်၊ မြေစာတွေ လာပုံတဲ့ ကားတွေသွားလာနေတဲ့ လမ်းပေါ်ကနေတဆင့် လက်ပန်းတောင်း တောင်ပေါ် ရောက်လာပါတယ်။
လက်ပန်းတောင်းတောင် အကြောမှာ အပင်ကြီးတွေ ဆိုတာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ လယ်ကွင်းထဲမှာ တောင်က ထီးထီး ရှိနေပါတယ်။ လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဧရိယာဖြစ်တဲ့ ဧက ၇၈၆၇. ၇၈ အတွင်းမှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ ကတည်းက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အမိန့်ကြော်ညာစာ အမှတ် ၂/ ၈၉ နဲ့ အပ်နှင်းထားတယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ပုဒ်မ ၁၄၄ ကို ထုတ်ပြန်ထားခဲ့ပါတယ်။
တောင်တွေရဲ့ အလယ်မှာ မြေချိုင့်ကြီးတွေနဲ့ စီမံကိန်းလုပ်ကွက်တွေကို မြင်တွေ့ရပေမယ့် အလုပ်လုပ်ရင် အသုံးပြုတဲ့ မြေတူးစက်တွေ၊ လုပ်ကွက် ၀န်ထမ်းတွေ တဦးမှ မရှိသလို လုံခြုံရေး ရဲတွေလည်း ရှိမနေပါဘူး။
လယ်တီ ဆရာတော်ဘုရားကြီး သီတင်းသုံး ကျမ်းပြုစုခဲ့တဲ့ သိမ်ကျောင်းကိုလည်း မြေချိုင့်ကြီးတွေရဲ့ အလယ်မှာ ထင်ထင်ရှားရှား တည်ရှိနေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ တချိန်က ဒီတောင်တ၀ိုက်မှာ ချေ၊ ယုန် စတဲ့ တော သတ္တ၀ါတွေ ကျက်စားနေခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ မရှိသလောက် ရှားပါးသွားပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ဒေသခံတွေက ပြောပြတယ်။
“ကျနော်တို့လည်း စောင့်ကြည့်နေတယ်။ နေ့တိုင်း လက်ပန်းတောင်းတောင် တ၀ိုက်မှာ နွားကျောင်းသွားတယ်။ ဘယ်သူမှ လာတားတာ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီစီမံကိန်း ဆက်လုပ်နေ သလား ဆိုတာကို ကျနော်တို့ အမြဲ စောင့်ကြည့်နေတယ်” လို့ ၀က်မှေး ရွာသားတဦးက ပြောပြတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတက နိုင်ငံခြား ခရီး သွားနေတဲ့အတွက် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က အစီရင်ခံစာကို မတင်သွင်းရသေးတဲ့ အကြောင်း၊ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတကို တင်ပြသွားမယ့် အကြောင်း လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသခံ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်မှာ ပါဝင်တဲ့ ၀က်မှေးရွာသား ကိုဇော်ဦးက ဆိုပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်က မီဒီယာနဲ့ ဒေသခံတွေကို ဘယ်အချိန်မှာ ထုတ်ပြန်ပေးမယ်ဆိုတာ မသိရပေမယ့် သူတို့ တင်ပြရမယ့် ဒေသခံ ကော်မရှင်က အစီရင်ခံစာကိုတော့ ဒေသခံတွေနဲ့ ပြည်သူတွေသိအောင် သမ္မတကို တင်ပြပြီးတာနဲ့ ထုတ်ပြန်မယ်လို့ သူက ဆက်ပြောတယ်။
“အခုလို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် အဖြေမထွက်ခင် သူတုိ့ဆန္ဒပြတာကလည်း ဘယ်လိုမှ မယူဆပါဘူး။ သူတို့လည်း သူတို့အပိုင်း လုပ်ကြတာပဲ။ ကျနော့် အနေနဲ့ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ဘာမှမပြောချင်သေးဘူး” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 12:55 PM ,0comments
ဦးပိုင် သံမဏိစက်ရုံ မီးလောင်ကျွမ်း
ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခန့်က အင်းစိန်မြို့နယ် အတွင်းရှိ အမှတ် ၃ သံမဏိစက်ရုံ မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ရာ တနာရီခွဲခန့် အကြာမှ မီးငြိမ်းသွားကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစက်ရုံသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ် ပုလဲလမ်းပေါ်ရှိ မြန်မာ့ စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (ဦးပိုင်) ပိုင် စက်ရုံဖြစ်ပြီး ယနေ့နံနက် ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ် အချိန်မှ စတင်၍ မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရာ မွန်းတည့် ၁၂ နာရီခန့်မှ မီးငြှိမ်းသတ် နိုင်ခဲ့သည်ဟု အင်းစိန်မီးသတ်ဌာနက ပြောသည်။
“ဘယ်လိုကြောင့် လောင်သလဲ ဆိုတာ စစ်ဆေးနေတုန်းမို့ ပေါ့ဆမီးလား၊ ဘာမီးလား ဆိုတာကို ပြောရခက်ပါတယ်။ အစိုးရပိုင် စက်ရုံတခုဆိုတော့ စစ်ဆေးနေပါတယ်” ဟု အင်းစိန်မီးသတ်မှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ဆိုသည်။
မီးလောင်ကျွမ်းသည့် နေရာတွင် ရှိနေသော ၎င်းစက်ရုံမှ သံရည်ကျိုလုပ်သား ကိုထင်အောင်ကမူ သံပြားဖြတ်သည့် နေရာမှ စတင် လောင်ကျွမ်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ သံပြားဖြတ်စက်မှ မီးစက ဘေးနားရှိ ဆီလှောင်ကန်ပေါ်ကျကာ ထိုမှတဆင့် ကားများထံသို့ မီးကူးသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။
“တာယာအဟောင်းပုံပေါ် မီးစတွေ ကျပြီး မီးခိုးတွေက တအားထွက်လာတာပါ။ သိပ်တော့ မများပေမယ့် ခန့်မှန်းခြေ ကားဟောင်း ၅ စီး၊ ၆ စီးလောက်တော့ မီးလောင်သွားတယ်။ ဘယ်လောက် ပျက်စီးလဲတော့ မသိဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
မီးလောင်စဉ် ပစ္စည်း ဆုံးရှုံးမှုများ ရှိသော်လည်း လူတဦးမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း မရှိကြောင်း၊ မီးလောင်သည့် နေရာသို့ မြို့နယ် ၅ မြို့နယ်မှ ကြက်ခြေနီအင်အား ၂၁ ဦးတို့ လာရောက် ကူညီခဲ့ကြောင်း၊ သေကြေမှု၊ ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်ခံရမှုတို့ မရှိကြောင်း အင်းစိန် ကြက်ခြေနီအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူ ဦးမင်းထွဋ်က ပြောသည်။
မီးလောင်ရာ နေရာအနီး အင်းစိန်ချောင်းဝ လမ်းပေါ်တွင် နေထိုင်သူ မျက်မြင် တဦးဖြစ်သည့် ဒေါ်ခင်စောက “မီး သတ်ကား တွေကတော့ ၁၂ စီးလောက် သွားတာတွေ့တယ်။ ပေါက်ကွဲ တာတော့ မကြားဘူး။ ညှော်နံ့တော့ နံတယ်။ ထိခိုက် တယ်လို့လည်း မကြားမိဘူး” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
သံမဏိစက်ရုံ မီးလောင်သည့် အသေးစိတ် အခြေအနေနှင့် ပတ်သတ်၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရုံးသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ယင်းဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးက လက်ရှိ တွင် ဆုံးရှုံးမှု တန်ဖိုးကို တွက်ချက်လျှက် ရှိသေးကြောင်း၊အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း၊ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု ကိန်းဂဏန်းများ မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြပါက အထက်မှ အပြစ် ပေးလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိုးရပိုင် စက်ရုံ ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိစစ်ဆေးမှုအရ ပေါ့ဆမီး ဖြစ်ခဲ့လျှင် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကို သတ်မှတ် ဥပဒေအတိုင်း အရေးယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 12:50 PM ,0comments
နိုင်ငံတကာ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာကိုယ်စားပြု အလှမယ်အဖြစ် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက် Miss Myanmar International ပြိုင်ပွဲကို Myanmar Tourism Federation ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ Myanmar Tourism Service က ကြီးမှူး ကျင်းပခဲ့တာ အခုဆိုရင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် မန္တလေးသူ ဂုဏ်ရည်အေးကျော်က ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြည့် နှစ်ကစလို့ မော်ဒယ်လ်လောကထဲကို ရောက်လာခဲ့တဲ့ သူဟာ ပြိုင်ပွဲပေါင်း ၇ ပွဲလောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ဆန်ခါတင် ၁၀ ယောက် စာရင်းထဲအထိ မ၀င်ခဲ့ဘူးသလို Miss La Pyae Won (မယ်လပြည့်ဝန်း) 2010 မှာ 2nd Runner up ရဖူးတယ်၊ နောက် မန္တလေးမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss Loykrathong 2012 မှာတော့ 2nd Runner up ရခဲ့ဖူးပါသေးတယ်။ ပရဟိတ လူမှု အကျိုးပြု အလုပ်တွေလည်း လုပ်ကိုင်နေတဲ့ မယ်မြန်မာ ဂုဏ်ရည်အေးကျော်ကို သူယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ Miss Myanmar International 2013 ပြိုင်ပွဲ အတွေ့အကြုံ၊ သူ လက်ရှိလုပ်ကိုင် နေ တဲ့ ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲအတွက် ဘယ်လို ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်သွားမလဲ ဆိုတာကို ဧရာဝတီသတင်းထောက် မစပ်စုက ဆက်သွယ် မေးမြန်းထား ပါတယ်။
မေး။ ။ Miss Myanmar International ပြိုင်ပွဲ ၀င်ပြိုင်ဖြစ်ပုံ ပြောပြပေးပါဦး။
ဖြေ။ ။ တကယ်တော့ ကျမက Miss myanmar ကို မနှစ်ကတည်းက ဖောင်တင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် မန္တလေးက ရန်ကုန်ကို လူရွေးပွဲမှာ မလာဖြစ်လိုက်ဘူး။ အဲဒီတော့ မပြိုင်ဖြစ် တော့ဘူး ဖြစ်သွားတာပါ။ အဲဒါလည်း ကျမအတွက် အခွင့်အရေး ပိုကောင်း သွားတာပေ့ါနော်။ မနှစ်က ပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံကို အခွေကြည့်ပြီးတော့ Talent Show အတွက်ကို ဘယ်လို ကောင်းအောင် လုပ်နိုင်မယ် ဆိုတာကို သိသွားတယ်။ နောက် ဘာသာစကားဟာ တကယ်အရေးကြီးပါလား ဆိုတာ သိသွားတယ်။ ကျမ ဘာသာစကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြင်ဆင်ချိန် ပြန်ရသွားတယ်။ ပြီးတော့ စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲ အတွက်လည်း ကျမ ငယ်ငယ်က စောင်းကို အခြေခံ သင်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတော့ အခြေခံ နုတ်တွေ နားလည်ထားတော့ အခုဒီပွဲမှာ မြန်မာ့ရိုးရာ စောင်းဆိုတော့ ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားမိပြီးတော့ သုံးလေးလလောက် အလိုမှာ စောင်းတီး ပြန်ကျင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာသာစကားကတော့ B.A (English) နဲ့ ကျောင်းပြီးထားတာ ဆိုတော့ Informal လောက် ကျမ ပြောနေကျပါ။ ဒါပေမယ့် မေးခွန်းတွေ ဖြေဆို နိုင်အောင်လို့ ကျမ အင်္ဂလိပ်ကို ပြန်ပြီးတော့ လေ့လာခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ အလှအပအပြင် မယ်တယောက်ရဲ့ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ၊ ဘယ်လို လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ရ ပါသေးလဲ။
ဖြေ။ ။ လူရွေးပွဲက ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ကစပြီး မပြိုင်ခင်အထိ ကျမတို့ကို ဆက်တိုက် စခန်း သွင်းထားတာပေ့ါ။ ဒီ ကြားထဲမှာ ကျမတို့ လှုပ်ရှားမှုတွေအဖြစ် ငွေဆောင်ကို သွားရ တာတွေရှိတယ်။ မိဘမဲ့ကလေး ကျောင်းတွေကို သွားပြီးတော့ အားပေးစကားတွေ ပြောရတာတွေ ရှိတယ်။ ကျမတို့တွေကို ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့ စပွန်ဆာ ကုမ္ပဏီတွေကို သွားပြီး လေ့လာ ရတာတွေရှိတယ်။ နိုင်ငံတော်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အကြံပေးတွေ၊ နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစ ကျမတို့ကို လာပြီးတော့ Training တွေ လာပေးတယ်။ သူတို့ Training တွေမှာ လိုက်မှတ်ရတယ်။ နုတ်တွေ ပြန်ထုတ်ရပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ခိုင်းတဲ့ အိမ်စာတွေကလည်း အများကြီးပဲ။ တကယ်ကို ကောင်းတဲ့ ပွဲတခုပါ။ သေသေချာချာ လိုက်လုပ်ခဲ့ရင် ဆုမရ ခဲ့ရင်တောင် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အရမ်းတက်မယ့် ပွဲတခုပါ။ အတွေ့အကြုံတွေလည်း အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။
မေး။ ။ ပြိုင်ပွဲနေ့မှာကော ဘာတွေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး အဆင့်ဆင့် ပြိုင်ခဲ့ရပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ပထမဆုံး Round ကတော့ မြန်မာ အင်္ကျီနဲ့ပေါ့နော်။ အဲဒါကို ကျမတို့ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူးရှင့်။ ဒီဇိုင်နာတွေကို မဲနှိုက်ပြီး ကိုယ်ကျတဲ့ ဒီဇိုင်နာနဲ့ ကိုယ့်အင်္ကျီကို စပွန်ဆာ ယူရပါတယ်။ ဒုတိယ Round က ကျမတို့ အားကစားဝတ်စုံနဲ့ ပြိုင်ရတယ်။ ပြီးတော့ စွမ်းရည် ပြရတယ်။ နောက်ဆုံးတခုကတော့ ညနေခင်း ၀တ်စုံနဲ့ လျှောက်ပြီးတော့ ကျမတို့ကို မေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက် လာပါတယ်။ အယောက် ၂၀ စလုံးကို မေးတယ်။ အဲဒီမှာ ၁၀ ယောက် ဖြတ်ချလိုက်တယ်။ နောက် အဲဒီ ၁၀ ယောက်ကို တခါ ထပ်မေးတယ်၊ ၅ ယောက် ထပ်ဖြတ်ချတယ်။ နောက်ဆုံး အဲဒီ ၅ ယောက်ကို ထပ်မေးတယ်။ အားလုံးအင်္ဂလိပ်လို မေးခွန်းတွေချည်းပဲ ဖြေခဲ့ရတာပါ။
မေး။ ။ အခု Miss Myanmar International ပြိုင်ပွဲဟာ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အနေနဲ့ ထွက်ပေါ်လာမှာဆိုတော့ အရင်က ပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် တာဝန်ကြီးတယ်လို့ ယူဆမိ ပါသလား။
ဖြေ။ ။ တာဝန်ကြီးတယ် ဆိုတာထက်ကို တခြားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ တအားကို ကွာပါတယ်။ ဒါဟာ အရည်အချင်းပွဲလည်း ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ တခြားပြိုင်ပွဲတွေက မပြိုင်ခင် တပတ်အလိုမှာမှ စခေါ်တယ်။ နည်းနည်းပါးပါးပဲ Cat Walk လျှောက်နည်း လေးပဲ သင်ပေးတယ်။ ကျမတို့ကို ခေါ်တယ်ဆိုတာ Cat Walk လျှောက်ဖို့ပဲ ခေါ်တာလေ။ ဒါကျတော့ အဲလိုမဟုတ်ဘူး။ ဒီက Training တွေ အကုန်လုံးက ဘ၀အတွက် ပြန်အသုံးချလို့ရမယ့် ဟာတွေ အများကြီးပါတယ်။ ကျမတို့ အောင်မြင်မှုရအောင် ဘယ်လိုသွားမယ်၊ အောင်မြင်မှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်ခန်း စာတွေ အများကြီး သင်ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အရာတွေလည်း အများကြီးသင်ရတယ်။ အောင်မြင်မှုကို ဘယ်လို ရောက်အောင် သွားမလဲ၊ အောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ရင် ဘယ် လို စိတ်ဓာတ် မကျအောင် လုပ်ရမလဲ။ အများကြီးပါပဲ။ ပြိုင်ပွဲက တကယ်ကို အဘက်ဘက်က ပြည့်စုံအောင် လုပ်ထားတာပါ။ လိုအပ်ချက် လေးတွေတော့ ရှိပါမယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျမတို့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက် ဆုမရခဲ့ရင်တောင် အရမ်းကို အကျိုးရှိတဲ့ပွဲ တခုပါ။
မေး။ ။ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ စွမ်းရည်ပြိုင်ပွဲမှာ တူရိယာ ပစ္စည်းတွေ တီးခတ်မှုထဲက အခက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ မြန်မာ့စောင်း တီးခတ်မှုကို ဘာကြောင့် ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ စောင်းကတော့ ကျမ အခြေခံလည်း သင်ဖူးထားတာ်။ မနှစ်က ပြသွားတဲ့ Talent တွေကြည့်တော့ တချို့တွေက တော်တော် ထူးထူးခြားခြားနဲ့ လှပကောင်းမွန်တာကို တွေ့ပါတယ်။ ကျမလည်း ကျမရဲ့ Talent ကို အဲဒီလို ထူးထူးခြားခြားလေး ပြနိုင်ရင် ကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ အကတွေကို စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း ကမယ့်သူတွေက အရမ်းများမယ် ဆိုတော့ အားလုံးကမယ် ဆိုတော့လည်း တူညီသွားနိုင်မှာတွေ ရှိနိုင်မယ်ပေ့ါနော်။ အဲဒါနဲ့ စောင်းကို ပြန်ကျင့်ရင် ကောင်းမလားဆိုပြီး စဉ်းစားမိတယ်။ စောင်းက တော်တော် ခက်ခဲပါတယ်။ သီချင်းကြီး တပုဒ်လုံး တီးနိုင်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေး ခက်ခဲတော့ အခုအချိန်မှာ သင်မယ်ဆိုရင် မီနိုင်မယ် ထင်တယ်ပေါ့နော်။ မရရင်လည်း အကက သင်ရတာ လွယ်တာပဲ၊ အမြန်ဆုံး အက ပြန်ပြောင်းမယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သင်ရင်းနဲ့ပဲ စောင်းသံလေးကို ကြားနေရင်း၊ တီးနေရင်းနဲ့ကို အလိုလို ကြည်နူးနေတာပါ။ အဲဒီလို စောင်းတီးရတာ အလိုလို ကြည်နူးနေရင်း ကနေကို ဒါပဲ တီးတော့မယ်ဆိုပြီး စောင်းကိုပဲ ဆက်တိုက် သင်ယူခဲ့တာပါ။
ဒီပြိုင်ပွဲမှာက သီချင်း တပုဒ်လုံးစာ တီးလို့မရဘူး။ ၁ မိနစ်ပဲ ကန့်သတ်ထားတာ ဆိုတော့ သီချင်းတပုဒ်လုံးမှာမှ လက်စွမ်းပြလို့ရမယ့် တပိုဒ်လောက်ကို ပြန်ကျင့်တယ်။ ၁ မိနစ်မှာမှ စက္ကန့်လေးဆယ်စာ “အောင်စေ ပိုင်စေ” သီချင်းကို ချိန်ပြီး ပြန်ဖြတ်လိုက် ပါတယ်။ ဒိုင်တွေဘက်က အချိန်စေ့ပြီဆိုတဲ့ အချိန်မှာပဲ ကျမ ဘက်က တီးလုံးက လုံးဝ အပြတ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး သေသေချာချာ ချိန်ပြီး တောက်လျှောက် ကျင့်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီမှာပဲ အားလုံး သဘောကျနိုင်လောက်တဲ့ သီချင်း တပုဒ်ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖန်တီးပြီး တီးပြခဲ့တာပါ။
မေး။ ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အတွက် ဆုရသွားတဲ့ ဂုဏ်ရည်အေးကျော်ကို ပရိတ်သတချို့က သဘောကျသလို၊ တချို့ ပရိသတ် တွေကလည်း အားမရကြဘူး၊ သဘောမကျကြဘူးဆိုတဲ့ ဝေဖန်သံတွေ facebook ပေါ်မှာ အတော်လေး ညံသွားပါသေးတယ်။ အဲဒီအပေါ် ဘာပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ဝေဖန်သံတွေကို ကျမ ကြိုဆိုပါတယ်ရှင့်။ လူဆိုတာကလေ ကျမတို့ ကိုယ်တိုင်တောင်မှ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ကိုယ်က တခါတလေ ထပ်တူ ကျချင်မှ ကျမှာ။ ဒီတခုကို အကောင်း မြင်ပေမယ့် ခနနေ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ မကောင်းမြင်ချင် မြင်သွားတာပါ။ ကိုယ့် တယောက်တည်းမှာတောင်မှ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ်က မညီမျှတာတွေ ဖြစ်နေသေးတာ၊ လူတွေအများကြီး ဆိုလို့ရှိရင်တော့ အမြင်တွေက အများကြီး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အမြင်တွေအားလုံးကို ကျမနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ထဲမှာထား ပြောဆို နေကြတာကိုပဲ ကျမက ကြိုဆိုပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး။ ။ မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသုခ နာရေးကူညီမှုအသင်းရဲ့ နာရေးကား မောင်းတဲ့ ပရဟိတ လူမှုရေးအလုပ် လုပ်ဖြစ်ပုံလည်း သိချင်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်အပေါ်ကိုရော ဘယ်လိုခံ ယူထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ချမ်းမြသုခမှာ နားရေးကား မောင်းဖြစ်သွားတာက ၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျမ ကိုယ်တိုင်ကိုက စိတ်ထဲမှာ ချမ်းမြသုခက မိန်းကလေးတွေကို နားရေးကားမောင်းဖို့ ကားမောင်းတတ်တဲ့ သူတွေကို ခေါ်တယ်ပေ့ါနော်။ ကိုယ်လည်း ကားမောင်းတတ် နေတာပဲ၊ ကုသိုလ်ဖြစ်လေး တခုလောက် လုပ်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်ပေ့ါ။ အခုလို ကုသိုလ်ဖြစ် လုပ်ငန်းတွေ ကလည်း ကျမတို့နဲ့ မစိမ်းပါဘူး။ ကျမ အဖေကလည်း ဆရာဝန်ပါ။ သူက ဗြဟ္မစိုရ် အခမဲ့ ဆေးကုခန်းမှာရော၊ ကုတင် ၃၀၀ အခမဲ့ ဆေးကုခန်းမှာနဲ့ သံဃာ ဆေးရုံတွေမှာပါ အခမဲ့ ပုံမှန်ထိုင် ပေးနေတာပါ။ ညနေပိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် ဆေးခန်းမှာ ထိုင်တာပါ။ အဲဒီတော့ အဖေက အဲဒီလို ရှေ့ကနေ ဦးဆောင်လမ်းပြ လုပ်ထားတာတွေ ရှိနေတော့ ကျမကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီလို လုပ်ချင် စိတ်က သူ့ဘာသာသူ ဖြစ်လာတာပါ။ အထူးသဖြင့် မန္တလေးမှာက မိန်းကလေး ကားမောင်းတတ်တဲ့ ယာဉ်မောင်းက နည်းသေး တယ်လေ။ ဒီအပေါ်မှာ ဘယ်လိုခံယူထားလဲ ဆိုတော့ ကြည်နူးပါတယ်။ ဘ၀တွေ အမျိုးမျိုးကို ကျမကိုယ်တိုင် ခံစား သိရှိ လာပါတယ်။ ပြည်သူတွေ ဒီအသင်းကို အသုံးပြုတာက တချို့တွေလည်း ပိုက်ဆံတတ်နိုင်လို့ ကိုယ်တိုင် အလှူငွေလှူပြီး အသုံးပြု တာတွေ ရှိသလို၊ နာရေးကြေး လေးတောင် မတတ်နိုင်လို့ အသင်းရဲ့ အကူအညီကို ယူရတဲ့ မိသားစုလည်း အများကြီးပါ။ မန္တလေးမြို့ရဲ့ ဟိုး ချောင်ကြို ချောင်ကြား နေရာတွေလည်း ရောက်ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ သင်္ဂြိုဟ်တာတောင်မှ ပုံစံအမျိုးမျိုး ရှိတယ်၊ တချို့ကျတော့ မြစ်ထဲမျှောလိုက်တာ၊ ရိုးရာတွေ အမျိုးမျိုးရှိတာပေ့ါနော်၊ ဘ၀တွေ အမျိုးမျိုးကို ပိုပြီး သိလာရပါတယ်။
မေး။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရင်ကထက်စာရင် တနေ့ထက် တနေ့ များပြားလာတဲ့ လူမှုကူညီရေး အသင်းအဖွဲ့၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ အပေါ် ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကောင်းပါတယ်ရှင်။ ကျမတို့ မြန်မာတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုက အားနာတတ်တယ်၊ သူများကိုဆို အကူအညီပေး ချင်တယ်။ မထင်ရှားရင် မထင်ရှားမယ်၊ လူတိုင်းရဲ့ မသိစိတ်ထဲမှာ ရှိနေကြမှာပါ။ အခုလို လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပိုပြီး ရလာတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်တွေက ပြန်လည်နိုးကြွလာလို့ အခုလို အဖွဲ့တွေ ပိုပြီးပေါ်လာကြတာပါ။ ဒါဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုလုံးအတွက် အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ အပြုသဘော ဆောင်တဲ့ လက္ခဏာ တခုပါ။ ဒါကို ကြိုဆိုရမှာပါ။
မေး။ ။ ရှေ့လျှောက် ပရဟိတ အလုပ်တွေကို ဆက်လုပ်သွားဖို့ ရှိပါသေးလား။ ဘယ်လိုမျိုးတွေ လုပ်သွားဖို့ ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ပရဟိတကို နားရေးကား မောင်းတာတခုတည်းပဲ အစကတည်းက လုပ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ထပ် လုပ်ဖြစ်တာ
တွေ ရှိပါသေးတယ်။ စိမ်းရောင်စို လူမှုကူညီရေးအသင်းနဲ့ Global Warming Environmental Activity အနေနဲ့ သစ်ပင် စိုက်တာတွေလည်း ရှိသလို၊ မန္တလေးကို ကြွပ်ကြွပ်အိတ် ကင်းစင်နယ်မြေလို့ လုပ်လိုက်တော့ မန္တလေး တောင်ပေါ်နဲ့ ဦးပိန် တံတားပေါ်မှာ ကျမတို့ ပလပ်စတစ် ကင်းစင်ရေးအတွက် အမှိုက်တွေ လိုက်ကောက်ရတာတွေ၊ အဲဒီလို လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ အတူ ကျမတို့ မိသားစုလိုက် ဦးဂိုအင်ကာ ဆီမှာ တရားထိုင်ပါတယ်။ တရားစခန်းတွေ အမြဲတမ်း ၀င်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို ၀င်ဖြစ်တဲ့အပြင် အဲဒီ စခန်းတွေမှာလည်း လုပ်အားတွေ ပြန်ပေးဖြစ်တယ်။ ဦးဂိုအင်ကာ ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ နည်းလမ်းစဉ်နဲ့ပဲ ကလေး တရားပတ်တွေ ကျင်းပပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလေးငယ်တွေကို ငါးပါးသီလ ဆိုတာ ဘာလဲ သိလာအောင် အာနာပါန ၀င်လေ ထွက်လေ ဘယ်လိုရှုရတယ်။ နေ့စဉ် ဘ၀တွေမှာ ဒါကို ဘယ်လို ပြန်အသုံးချရမယ် ဆိုတာကို ကလေး တရားပတ်တွေမှာ ကျမတို့က ဘေးကနေ ကြီးကြပ်တဲ့သူ အနေနဲ့ လိုက်ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ လိုက်လံ ပြသရတာတွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Miss Myanmar အဖြစ် နိုင်ငံရဲ့ Ambassador မဖြစ်ခင်မှာတောင် ကျမရဲ့ လှုပ်ရှားမှု အများကြီးရှိခဲ့တာ အခုလို ဖြစ်လာပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ဒီလို လှုပ်ရှားမှုတွေ အများကြီးကို ထပ်ပြီးလုပ်သွားမှာပါ။
မေး။ ။ နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲအနေနဲ့ ဘယ်တော့လောက် သွားပြိုင်ရမှာပါလဲ။ အဲဒီအတွက်ကိုရော ဘယ်လို ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်နေပါပြီလဲ။ ဘယ်သူတွေက လုပ်ပေးမှာပါလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျမကို အသင်းက ၁၁ လပိုင်းမှာ သွားပြိုင်ရမယ်လို့ ဖုန်းဆက် ထားပါတယ်။ နိုင်ငံတော့ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ သူတို့က ကျမတို့ကို အခုလို မယ်မဖြစ်ခင် စခန်း သွင်းထားကတည်းက စာချုပ်တွေ ချုပ်ပြီးသားပါ။ ရသွားသောမယ် တယောက် သည် လေ့ကျင့်မှုကို မပျက်မကွက် တက်ရောက်ရမည်၊ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီမယ် ပြန်လာရင် ဆုရခဲ့ခြင်း၊ မရခဲ့ခြင်းပေါ်မှာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ Image ကိုက ကွာတယ်လေ။ အဲဒီတော့ သူတို့သည်လည်း ဒီလို ကောင်းသော Image တခုကို လိုချင်မှာပါပဲ။ သူတို့ကတော့ လေ့ကျင့်မှု အပြည့် ပေးသွားမှာပါပဲ။ ကျမလည်း သူတို့ရဲ့ လေ့ကျင့်ပေးမှုကို လိုက်လံကြိုးစားရင်းနဲ့ နိုင်ငံ ဂုဏ်ဆောင် တယောက်ဖြစ်အောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ဒီလို လေ့ကျင့်မှုတွေကို Miss Myanmar International ပြိုင်ပွဲ ကြီးမှူး ကျင်းပပေးခဲ့တဲ့ Myanmar Tourism Federation နဲ့ Myanmar Tourism Service အဲဒီ နှစ်ခုက ပူးပေါင်းပြီးတော့ ကျမကို လေ့ကျင့်ပေးမှာပါ။ ဒီအဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုအပြင် ဒေါ်တင်မိုးလွင်ရဲ့ လေ့ကျင့်ပေး မှုတွေလည်း ပါမှာပါ။
မေး။ ။ အရင်နှစ်ကလို ပရိသတ်က ပေးတဲ့ဆုနဲ့တင် မဟုတ်ဘဲ မြန်မာ ကိုယ်စားပြု မယ်တယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ တန်းတတန်း ၀င်အောင် လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ပရိသတ် တွေက လည်း ပြောနေကြပါပြီ။ အဲဒီအတွက်ကို ဘယ်လို ကြိုးစား ပြင်ဆင်သွားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ပရိသတ်တွေပြောသလိုပဲ ပရိသတ်က ပေးတဲ့ ဆုတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရယူနိုင်တဲ့ ဆုတဆုမျိုးလည်း သူတို့ ယူလာခဲ့ စေချင်တယ်လို့ ပြောနေကြပါတယ်။ ကျမ လည်း အဲဒီလိုဖြစ်အောင် လုပ်သွားချင်ပါတယ်။ ကျမကတော့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစား သွားမှာပါ။ အခု ဒီ Miss Myanmar ပြိုင်ပွဲမှာလည်း ဆုရရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့တာ မ ဟုတ်ပါဘူး။ ပြိုင်ပွဲရဲ့ တခုချင်း စီကို အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ အခု International သွားရမယ့် အခါမှာလည်း ဆုရရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထက်စာရင် ကျမ လုပ်စရာ ရှိတဲ့ အပိုင်းတွေ အကုန်လုံးကို အကောင်းဆုံး ကြိုးစားသွားရင်းနဲ့ပဲ နိုင်ငံ မျက်နှာပန်း လှအောင် ကြိုးစားချင်ပါတယ်။ ဘယ်လို ဖြည့်စွက်သွားရမယ် ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာ ကျမ စောင်းတီးတာကို ဒီထက် ပိုပြီး အများကြီး လေ့ကျင့်ရဦးမှာပါ။ ဒီပွဲမှာတင် သက်သေ ပြပြီးပါပြီ။ အောက်က ပရိသတ်တွေက အရမ်း လက်ခုပ်တီးပြီး အားပေးလိုက်တော့ ကီး လွဲသွားပါတယ်။ တီးရင်း တန်းလန်းနဲ့ ကီးလွဲသွားပြီး နောက်ပိုင်း တီးရင်းနဲ့ပဲ ကီးပြန်ဝင် သွားပါတယ်။ သီချင်းက ရပ်သွား ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တအား လေ့ကျင့်ထားတော့ ဒီအတိုင်း ဆက်တီးသွားရင်းနဲ့ ကီး ပြန်ဝင် သွားပြီး သီချင်းက ပြီးသွားတာပါ။ နိုင်ငံတကာမှာတော့ အဲဒီလို မရနိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကျမ အများကြီး လေ့ကျင့် သွားရဦးမှာပါ။ နောက် ခန္တာကိုယ် အလှပိုင်းလည်း အများကြီး လေ့ကျင့်ရဦးမှာပါ။ ကျမက မြန်မာ ခန္တာကိုယ် သေးသေး သွယ်သွယ်လေး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီတော့ မြန်မာ ခန္တာကိုယ် ထွားထွားလှလှလေး ဖြစ်အောင် ထပ်ပြီး ကြိုးစားရ ဦးမှာပါ။ ပရိသတ်ဆိုလို့ ကျမ တခုပြောချင်ပါသေးတယ်။ အခု facebook မှာ ဂုဏ်ရည်အေးကျော် ဆိုတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ အကောင့်တွေ အများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ ကျမ တကယ်သုံးတာက Gonyiayekyaw (Miss Myanmar International 2013) ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:09 PM ,0comments
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကာလတလျှောက် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေး ဖိနှပ်မှု၊ တိုင်းရင်းသား ဒေသတွင်း စစ်ပွဲတွေနဲ့ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး မြန်မာ-ထိုင်း ၂ နိုင်ငံ နယ်စပ်တလျှောက် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ခိုလှုံရောက်ရှိလာကြပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်မှာ ဒုက္ခသည်စခန်း ၉ ခုရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ ၁ သိန်းခွဲလောက် ရှိကြောင်း ထိုင်းအခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) က စာရင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ တတိယနိုင်ငံတွေမှာ ခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားသူ ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၈၄၉၀၀ ကို မှတ်ပုံတင် စာရင်းသွင်းပြီးပေမယ့် ခန့်မှန်းခြေ ၆၂၀၀၀ လောက်က ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ အတည်ပြုချက် မရသေးလို့ မှတ်ပုံတင် စာရင်း မသွင်းရသေးဘူးလို့ UNHCR စာရင်းအရ သိရပါတယ်။
ဒီဒုက္ခသည် စခန်းတွေထဲက တခုဖြစ်တဲ့ အုန်းပြန့် ဒုက္ခသည်စခန်းရှိရာကို ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ အတွင်းက ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက် မြို့ ကနေ ၂ နာရီကျော် ကားစီးရပြီး တောင်ပတ်လမ်းတွေက တဆင့် တောင်နံရံတကြော ရပ်ကွက်ပေါင်း ၁၆ ရပ်ကွက်နဲ့ စုစည်းထားတဲ့ အုန်းပြန့် ဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်ပါတယ်။
အမေရိကန် ဒုက္ခသည်ရေးရာ ကော်မတီ (ARC) ရဲ့ နောက်ဆုံး စာရင်းအရ အုန်းပြန့် ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ တိုင်းရင်းသား ပေါင်းစုံရှိကြပြီး လူဦးရေ ၁၅၀၀၁ ဦးရှိပါတယ်။ ကရင်၊ ဗမာ၊ မွန်၊ ကချင် အစရှိသဖြင့် တိုင်းရင်းသား စုံလင်ပါတယ်။
အုန်းပြန့် ဒုက္ခသည်စခန်းကို ရောက်တော့ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) ကနေတဆင့် ဧရာဝတီ သတင်းဌာနက အပတ်စဉ် တင်ဆက်နေတဲ့ ဒိတ်လိုင်း ဧရာဝတီ ဆွေးနွေးခန်းကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကို တွေ့ရပါတယ်။
“ကျနော်တို့က ဒိတ်လိုင်း ပရိသတ်တွေလေ။ ခင်ဗျားတို့ ဧရာဝတီတခုတည်းပဲ အဲဒီလို ဆွေးနွေးခန်းတွေ လုပ်တာ၊ သိပ်ကြိုက်တယ်” လို့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်း ကိုစိုးမြင့်က ပြောပါတယ်။
နောက်မှ သိရတာက စခန်းတွင်းမှာ ဒုက္ခသည်တဦးက ရုပ်သံလိုင်းတွေကို သူ့နည်းပညာအစွမ်းနဲ့ ချိတ်ပြီး အိမ်တွေကို တလ ဘတ် ၃၀၀ နှုန်းယူကာ မြန်မာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ DVB အပါအ၀င် ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းတွေကို ကေဘယ်နဲ့ သွယ်ပေးပါတယ်တဲ့။
ဒီအတွက် သူတို့မှာ ကမ္ဘာကြီးကို ရုပ်မြင် သံကြားလိုင်း ပြူတင်းတံခါးတွေကနေ ကြည့်နိုင်လို့ ဗဟုသုတလည်း ရပါတယ်လို့ ကိုစိုးမြင့်က ပြောပါတယ်။
အဆိုပါ ဒုက္ခသည်တွေဟာ နိုင်ငံရေးကြောင့် ရောက်လာသူတွေရှိသလို စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်တွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့လည်း နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း မုန်းတိုင်းလို သဘာဝဘေးကြောင့် နေရပ်ရင်းမှာ ဘယ်လိုမှ ရပ်တည်လို့မရတော့လို့ ထွက်ပြေးလာသူတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီလို ဒုက္ခသည်တွေရှိသလို ရွှေငွေအပြည့်နဲ့ တတိယနိုင်ငံ အခြေချရေး အိပ်မက်နဲ့ ရောက်လာသူ ဒုက္ခသည်မျိုးလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဘာသာတရား အနေနဲ့လည်း အဆိုပါ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းမှာ ဘာသာကြီး ၄ ခုစလုံး ရှိပါတယ်။ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း ၂၁ ကျောင်း၊ အစ္စလမ် ဗလီ ၅ ခု၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၅ ကျောင်း၊ ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်း ၁ ကျောင်းရှိပါတယ်။ ဒုက္ခသည် စခန်းဖြစ်ပေမယ့် ဘာသာရေး လွတ်လပ်မှုလည်း ရှိတာ သတိထားမိပါတယ်။ ဘာသာရေး ပွဲတော်တွေလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကျင်းပကြလေ့ရှိပါတယ်တဲ့။
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ စခန်းတွင်းမှာ JC လို့ သူတို့ ခေါ်တဲ့ တောတွင်း ကောလိပ်တကျောင်း၊ ကော့မူးရာ အထက်တန်းကျောင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေကတော့ ထောင်ချီပြီး ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းက ကျောင်းတွေဆိုတော့ ပြည့်စုံမှုမရှိတာ မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေက ပညာကို တကယ်လိုလားကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
“သမီးတို့က အနာဂတ် ပျောက်နေသူတွေဆိုတော့ ပညာရေးကို ကြိုးစားတယ်” လို့ အသက် ၁၅ နှစ်အရွယ် ကရင် အမျိုးသမီး ကလေးတဦးက ဆိုပါတယ်။
ကျောင်းတက်နိုင်သူတွေရှိသလို ကျောင်းမတက်နိုင်တဲ့ ကလေးသူငယ်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ စခန်းတွင်းမှာ အမှိုက်ကောက်ပြီး ပြန်ရောင်းကြတယ်။ အုန်းပြန့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းက အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ တကယ်လည်း အနာဂတ် မဲ့နေကြပါတယ်။
အစ်မတွေလို ကျောင်းတက်ချင်လို့ ငိုနေသူ မိန်းကလေး တယောက်ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ပညာရေး စေတနာ့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် ပုံမှန် လစာဆိုတာ မရှိကြပါဘူး။ သူတို့လည်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းက ဒုက္ခသည်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် သက်ဆိုင်ရာ NGO အဖွဲ့တွေရဲ့ ထောက်ပံ့ မှုအဖြစ် တလကို မုန့်ဖိုးငွေ ဘတ်ငွေ ၆၀၀၊ ၇၀၀ တော့ ရကြကြောင်း အုန်းပြန့် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင်းမှ ကျောင်းသား ၆၀၀ ခန့် ရှိတဲ့ အမှတ် (၃) မွတ်စလင် အလယ်တန်း ကျောင်းအုပ် ဦးအောင်ဇော်ထွန်းက ပြောပါတယ်။
“ဒီက ကျောင်းဆရာတွေက လစာမရှိဘူး။ မုန့်ဖိုးငွေ ၆၀၀ ဘတ် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀) ဆိုတာ မုန့်ဖိုးအနေနဲ့ရတယ်။ ကျနော်တောင် ကျောင်းအုပ်မို့ မုန့်ဖိုးအဖြစ် ဘတ် ၇၀၀ ပဲ ရတယ်” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ပညာတတ် တချို့ကတော့ စခန်းတွင်းက လူငယ်တွေကို အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ကွန်ပျူတာပညာ သင်ပေးရင်း ပညာဒါန ပြုနေသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဥရောပ ကော်မရှင်က ထောက်ပံ့ကူညီမှုနဲ့ ဆေးရုံတရုံ ရှိပါတယ်။ ဆေးရုံနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ သူတွေက ခွင့်မပြုပါဘူး။
အဲဒီ ဆေးရုံကလည်း သားဖွားဆောင်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ ကလေး လူနာဆောင်တွေနဲ့ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ရှိပါတယ်။ ထိုင်းဘက်မှာ လျှပ်စစ်မီးကြေးက တယူနစ်ကို ၄ ဘတ်သာ ပုံမှန်ရှိပေမယ့် ဒုက္ခသည် စခန်းတွင်းအတွက် တယူနစ် ၁၀ ဘတ် သတ်မှတ်လို့ ဒီဆေးရုံက ထိုင်း လျှပ်စစ်မီးကို မယူဘဲ ကိုယ်ပိုင် မီးစက်ကြီးတလုံးနဲ့ လည်ပတ်နေပါတယ်တဲ့။
စခန်းတွင်းမှာ ဖုန်းနံပတ် တချို့ကို ဆေးရုံအနီးက အရေးပေါ် လူနာတင်ကားထားရာ နေရာတခုမှာ ချိတ်ဆွဲထားပြီး အချိန်မရွေး ဖုန်းဆက် အကူအညီ တောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ စခန်းတွင်း ဆေးရုံက မနိုင်တဲ့ လူနာမျိုးဖြစ်ရင်တောင် နီးစပ်ရာ အုန်းဖန်မြို့၊ မဲဆောက်မြို့တွေက ဆေးရုံတွေကို လိုက်ပို့ပေးတယ်လို့ သိရတယ်။
ကျန်းမာရေးပြဿနာ တခုခု ဖြစ်လာပြီ ဆိုရင်တော့ စခန်းတွင်း ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ အတော်စိတ်ပူရတဲ့ ကိစ္စလို့ ပြောကြပါတယ်။ တဖက်က အသက်နဲ့ ကျန်းမာရေး၊ တဖက်က ငွေကြေး မရှိမှုပါ။ ဒီအတွက် သောကတွေဆင့်ဆင့် ရောက်လာတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျန်းမာရေးတခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အသက်ရှင်ရေးဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်က ခမ်းခြောက်သွားတာပါပဲ” လို့ မကြာသေးမီက ဇနီးမောင်နှံ ၂ ဦးလုံး ဆေးရုံတက်ခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားဟောင်း တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကြည်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ NGO တွေကနေ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းပေးမှုတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒုက္ခသည် စခန်းတွင်းမှာ စားဝတ်နေရေးကလည်း အဓိက အကျဆုံး အခက်အခဲပါ။ အာဟာရပြည့်မီတဲ့ အစားအစာတောင်မှ ဖူလုံမှု မရှိပါဘူး။ ဒုက္ခသည်တွေကို ဝေငှတဲ့ ရိက္ခာတွေက လည်း တကယ်တမ်း လုံလောက်မှု မရှိဘူးလို့ ဒုက္ခသည်တွေက ပြောပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီထောက်ပံ့နေတဲ့ ထိုင်း-နယ်စပ်တလျှောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ညွှန့်ပေါင်းအဖွဲ့ (TBBC) နဲ့ နိုင်ငံတကာက အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ NGO အဖွဲ့ ၂၀ လောက်ရှိပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေကို ဝေငှတဲ့ရိက္ခာတွေက လူတဦးကို တလအတွက် ဆန်က ၁၂ ကီလို၊ ဆီက လီတာဝက်၊ ပဲက တကီလို၊ မီးသွေးက အိမ်ထောင် ဦးစီးအတွက် ကီလို ၂၀ နဲ့ တဦးချင်း အတွက် ၅ ကီလို၊ တနှစ်စာ အိမ်ပြင်စရိတ် ဘတ်ငွေ ၃၀၀ စသဖြင့် ရကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
“မီးသွေးက မလောက်ဘူးလေ။ ဒီတော့ ကျမတို့လည်း အခုလို ထမင်းရည်နဲ့ မီးသွေးမှုန့်တွေကို လုံးပြီး နေပူလှမ်း၊ ပြန်သုံးရတာပဲ” လို့ မီးသွေးမှုန့်တွေကို လုံးပြီး အခြောက်လှမ်းနေတဲ့ ဒုက္ခသည်အမျိုးသမီးတဦးက ပြောပါတယ်။
စားဝတ်နေရေးအတွက် ဒုက္ခသည်တွေမှာ ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရတယ်။ တချို့ အရွယ်ရောက်သူတွေကတော့ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းက ထွက်ပြီး စခန်းအနီးက ထိုင်းနိုင်ငံသား မုံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ တောင်ယာလုပ်ငန်းတွေမှာ ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၀၀ ၀န်းကျင်လောက် ရဖို့ တနေကုန် အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။
တချို့လည်း မြေကွက်လပ်လေးတွေမှာ အသီးအနှံစိုက်ပျိုး စားသောက်၊ ရောင်းချပြီးလည်း ဘ၀ရှင်သန်ရေးအတွက် အားမွေးနေကြတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေဟာ မနက် စောစော ၃ နာရီလောက်ထပြီး စခန်းနားက မျှော့ရွာဆီသွားရတယ်။ အဲဒီမှာ တောင်ယာ အလုပ်သမား လာခေါ်တဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေက တနေ့ လုပ်အားခ ဘတ် ၁၀၀၊ ၁၂၀ ဈေးနှုန်းနဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ငရုတ်သီးခူးတာ အစရှိတဲ့ တောင်ယာလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေကို ကားတွေနဲ့ လာခေါ်တတ်ကြတယ်လို့ ဒုက္ခသည်တွေက ပြောပါတယ်။
“မနက်ဆို ထောင်ထဲတုန်းကလိုပဲ။ အလုပ်ဘုတ်တွေ ထွက်ခါနီး တန်းစီပြီး ငုတ်တုတ်လေးတွေ ထိုင်နေရတာ။ ကိုယ် ဈေးကြိုက်တဲ့ အလုပ်က ခေါ်သံကြားရင် အလုအယက် လက်ထောင်ရတယ်။ ပြီးရင် ကားပေါ်တက် လိုက်သွား၊ တနေ့ ဘတ် ၈၀ ကနေ ၁၅၀ လောက်တော့ ရတယ်။ အလုပ်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပိုက်ဆံရတယ်” လို့ အုန်းပြန့် ဒုက္ခသည် စခန်းက ဦးလှသန်းက ပြောပါတယ်။
စခန်းတွင်းက လူတွေအတွက် အ၀တ်အစား၊ ဒီဇိုင်းဆန်းလေးတွေ ချုပ်ပေးရင်း အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းသူ တချို့လည်း တွေ့ပါတယ်။
“ကျမကတော့ စက်ချုပ်တယ်။ တချို့ကိုလည်း သင်ပေးတယ်။ ရောက်နေတဲ့ ဘ၀ကို ဒီလိုနည်းနဲ့ ရှင်သန်အောင် လုပ်နေရတာပဲ” လို့ စက်ချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ မဇွန်သူက ဆိုပါတယ်။
ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ တနေ့ ၀င်ငွေ ဘတ် ၁၀၀ လောက် ရဖို့ဆိုတာ အလွန်ခက်ခဲပါတယ်လို့ ဒုက္ခသည်တွေက ပြောပါတယ်။
“ဒီမှာက နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေ ရောက်နေတဲ့ ကိုယ်မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေက အထောက်အပံ့ မရှိရင်တော့ ဘယ်လိုမှ မလွယ်ဘူး” လို့ ကချင်ပြည်နယ်က လာတဲ့ ဂေါ်ရခါးအမျိုးသမီး တဦးက ပြောပါတယ်။
ဒုက္ခသည် စခန်းတလျှောက် အိမ်ဆိုင်လေးတွေလည်းရှိပြီး ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတွေကတော့ ကရင်တွေ၊ ဗမာတွေ ပိုင်ဆိုင်တာ သိပ်မရှိလှပါဘူး။
ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတွေမှာ နိုင်ငံခြားငွေ မျိုးစုံ လဲလှယ်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တချို့ဆို ဒုက္ခသည်သာ ဆိုပေမယ့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်တွေတောင် ရှိတယ်လို့ သိရတယ်။ သူတို့တွေအတွက် ဒုက္ခသည်စခန်းဟာ စီးပွားရေး ဈေးကွက်ကြီး တခုလိုပါပဲ။
တကယ့် ဒုက္ခသည် စစ်စစ်တွေကိုတော့ တဲအိမ် ယိုင်နဲ့နဲ့၊ မိုးလေ နည်းနည်း ပြင်းထန်ရင် လွင့်ပါသွားမယ့် နေရာတွေမှာ မြင်ရပါတယ်။
ဒုက္ခသည် လူငယ်တယောက်ဆိုရင် တဲအိမ်လေးနဲ့ စတိုင်ကျကျ ဆံပင်တွေကို ညှပ်ပေးရင်း အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းပါတယ်။ သူ့အတွက် တ၀မ်းတခါးကို မနည်း ရုန်းကန်နေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အုန်းပြန့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်းက ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အများစု တူညီတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကတော့ တတိယ နိုင်ငံတခုခုမှာ အခြေချ နေထိုင်ဖို့ပါပဲတဲ့။
“ဟိုအရင်က ဒီစခန်းထဲမှာ လူ ၄ သောင်းကျော်၊ ၅ သောင်းလောက်ရှိတယ်။ တတိယနိုင်ငံ အခြေချရေး မျှော်လင့်ချက် သိပ်မရှိတော့တဲ့အခါ အခု စခန်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ လူတွေက တကယ့်ကို မြန်မာပြည် ပြန်ဖို့ အဆင်မပြေသူတွေပါပဲ” လို့ ဒုက္ခသည် တဦးဖြစ်သူ မအေးအေးမိုးက ဆိုပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂရဲ့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး လက်မှတ်ရထားသူတွေ ရှိသလို မရသေးတဲ့ လူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ရပြီး သူတွေ အတွက်တော့ မျှော်လင့်ချက်က အနီးဆုံးမှာ ရှိနေတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ဒါကလည်း ထိုင်းပြည်ထဲရေးက အသိအမှတ်ပြုမှု ရှိမှသာ တတိယနိုင်ငံ ထွက်ခွာလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ ကလည်း ၁၉၅၁ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ပေးရေး သဘောတူညီမှု (1952 Refugee Convention) မှာ လက်မှတ် မထိုးထားလေတော့ ၂၀၀၆ နောက်ပိုင်းမှာ ထိုင်းနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်အသစ်တွေကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုဘဲ ရှိနေခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် လူသားချင်း စာနာမှုအရ တတိယနိုင်ငံတွေ ထွက်ခွာရေး ဒုတိယနိုင်ငံရဲ့ တာဝန်ကိုတော့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အခုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က ပြန်လည် စတင်ကာ တဦးချင်းစီအလိုက် တတိယနိုင်ငံတခုခုမှာ ပြန်လည် အခြေချနေထိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အကောင်အထည်ဖော်နေပါတယ်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းရောက်လာတဲ့ လူသစ်လို့ ခေါ်တဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မှေးမှိန်နေတာပါပဲတဲ့။ ဘယ်လိုမှ စာရင်းသွင်းခြင်း မခံရတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ တတိယနိုင်ငံ အခြေချရေးဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်က လုံးဝ မဲ့နေတယ်လို့ ဆိုတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လည်း မြန်မာဒုက္ခသည် ကိစ္စဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နေလေတော့ နေရပ်ရင်းပြန်ပို့လိုတဲ့ ဆန္ဒရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး လုပ်လာတဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ ဒုက္ခသည် ပြန်လည် လက်ခံရေးကိစ္စတွေလည်း နှစ်နိုင်ငံ တာဝန်ရှိသူတွေလည်း ဆွေးနွေးကြတာပါ။
မြန်မာအစိုးရပိုင်းကတော့ ပွင့်လင်းစပြုလာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်နေတဲ့အတွက် ဒုက္ခသည်များ လက်ခံရေး ကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီး ဒုက္ခသည် မိသားစုတွေအတွက် အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းဖို့ လယ်ယာမြေ ၁၀ ဧကစီ ပေးရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင်သစ်များ ဖန်တီးပေးရေး အစီအစဉ်တွေ ဆွဲနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၂ စက်တင်ဘာလမှာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဧရာဝတီနဲ့ သီးသန့် အင်တာဗျူးမှာ တိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လာနိုင်ဖို့ မိုင်းတွေရှင်းတာ၊ နေအိမ်တွေ ဆောက်တာ၊ အစားအသောက် တနှစ်စာ ထောက်ပံ့တာတွေ လုပ်ပေးဖို့ ရှိကြောင်း၊ တောင်ယာလုပ်လိုသူများကို ခြံနှင့် လယ်လုပ်စ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးပြီး မလုပ်လိုသူများအတွက် နယ်စပ်ဝင် ပေါက် ထွက်ပေါက်တွေမှာ စက်မှုဇုန်လိုမျိုးတွေ တည်ဆောက်ပေးမယ်လို့တော့ ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။
စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်တွေကတော့ လတ်တလော တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုတွေ မပီပြင်သေးလို့ နေရပ်ရင်း ပြန်ဖို့ဆိုတာ အဆင်သင့်မဖြစ် ကြသေးကြောင်း ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:03 PM ,0comments
အမျိုးသမီး ၂ ဦးကို လိင်စိတ်ကြွဆေး ရောင်းချမှုဖြင့်...
လျှပ်စစ်မီး ခွဲတမ်းစနစ်ကြောင့် မူဆယ် လုပ်ငန်းရှင်မ...
အထွေထွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးရန် အစီအစဉ် မရှိေ...
ရုရှားက မြန်မာနှင့် စစ်ရေး ပူးပေါင်းမှု ပိုမိုလုပ်ေ...
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွက် New York Con...
စောင်းတီး စွမ်းရည်ပြခဲ့သူ Miss Myanmar Internation...